သဘာဝဆုလာဘ်များ၊ Neuroplasticity နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
သဘာဝဆုလာဘ်များ, Neuroplasticity, နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစွဲ (2011)
Neuropharmacology ။ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ၊ 61(7): 1109-1122 ။ 2011 ဧပြီလ 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2011.03.010
PMCID: PMC3139704 NIHMSID: NIHMS287046
ခရစ္စတိုဖာအမ် Olsen, Ph.D ဘွဲ့ကို1,2,3
ကြောင်း PMC တခြားဆောင်းပါးတွေကိုကြည့်ပါ ဆင့်ခေါ် အဆိုပါထုတ်ဝေဆောင်းပါး။
Tဤနေရာတွင်သဘာဝဆုများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်သည့် ဦး နှောက်ဒေသများအကြားထပ်တူထပ်မျှထပ်နေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးတွင်“ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သော” သို့မဟုတ်“ အမူအကျင့်” စွဲလမ်းမှုများကိုပိုမိုမှတ်တမ်းတင်လာသည်။ ရောဂါများသည်စျေးဝယ်ခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊.
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကဲ့သို့ပင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်တဏှာ၊ အပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ အပြုအမူ၌ဤပြောင်းလဲမှုပလပ်စတစ်မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်စပ် ဦး နှောက်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုများရရှိခြင်းသည် ဦး နှောက်၏ဒေသများရှိအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပလပ်စတစ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည်။ သုတေသနအရသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအာရုံကြောပလပ်စတစ်နှင့်ဆင်တူချက်များစွာရှိကြောင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးပေါ် မူတည်၍ သဘာဝဆုလာဘ်များမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့် neuroplasticity ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
keywords: အသစ်အဆန်းရှာ, စွဲလမ်း, လှုံ့ဆျောမှု, အားဖြည့်, အမူအကျင့်စွဲ, plasticity
1 ။ နိဒါန်း
ယခုအခါများပြားလှသောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုအပြုအမူများဖြင့်အတင်းအကျပ်ပါ ၀ င်မှုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းခံရသူများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သူတို့၏ဘဝနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်မှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ P“ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သော” သို့မဟုတ်“ အမူအကျင့်” စွဲလမ်းမှုများကိုခံစားနေရသောလူများကိုဆေးခန်းတွင်မှတ်တမ်းတင်လာသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများမှာစျေးဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ (Holden, 2001; ဂရန် et al, 2006a) ။ ဤအရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ၏ဘာသာရပ်များအစွန်းရောက်များနှင့်ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကဲ့သို့ထင်ရစေခြင်းငှါနေစဉ်, မမှန်ဤအမျိုးအစားများကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သာမန်ဖြစ်ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း (ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် 1-2% မှာခန့်မှန်းခဲ့ကြWelte et al, 2001အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်), 5% (Schaffer နှင့် Zimmerman, 1990မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါဘို့), 2.8% (Hudson et al, 2007) နှင့် compulsive ဝယ်ဘို့ 5-6% (အနက်ရောင်, 2007).
DSM-IV သည်ဤရောဂါများနှင့်အခြား "စွဲလမ်းစေသည့်" အပြုအမူများကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည် DSM-IV သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရည်ညွှန်း။ ပင်အသုံးအနှုန်းကို“ အလွဲသုံးစားမှု” နှင့်“ မှီခိုမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းများကိုအစားထိုးသုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။။ DSM-IV တွင်အမူအကျင့်စွဲများကို“ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါများ”၊ “ အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်း” နှင့်“ အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောစိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများ” (အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်)Holden, 2001; Potenza, 2006) ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကပိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို (ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ဤ Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်ရော်ဂျာနှင့် Smit, 2000; ဝမ် et al, 2004b; Volkow နှင့်ပညာရှိ, 2005; ဂရန် et al။ , 2006a; Petri, 2006; Teegarden နှင့်ဘေးလ်, 2007; Deadwyler, 2010; ဂရန် et al, 2010) ။ တကယ်တော့, Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလေးနက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (ရှိနေသော်လည်းအဆိုပါအပြုအမူအတွက်ပါဝငျပါဝင်သောစွဲ၏ဂန္ထဝင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် fitHolden, 2001; Hyman et al, 2006) ။ ဤသည်ဖြစ်ရပ်ဆန်းစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များကတန်ဖိုးထားခဲ့ပြီး, နှင့် DSM-5 များအတွက်အဆိုပြုတည်းဖြတ်မူများကို (ကစွဲလမ်း၏အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူများပါဝင်သည်(ယား), 2010) ။ ဤအမြိုးအစားအတွင်းတစ်အပြုအမူစွဲအမျိုးအစား (ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အလားအလာအင်တာနက်စွဲလမ်းပါဝငျမညျသောအဆိုပြုပြီးပါပြီ(ယား), 2010; O 'Brien, 2010; Tao က et al, 2010).
ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း, တဏှာ, အမူအကျင့်အပေါ်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှု, သည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် relapse မြင့်မားမှုနှုန်းအပါအဝင်အလားတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ပုံစံများ၌ထငျရှား Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ကဲ့သို့ပင်Marks, 1990; Lejoyeux et al, 2000; မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားသိပ္ပံ (NIDA) et al, 2002; Potenza, 2006) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များအကြားတူညီလည်းဇီဝကမ္မတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လူသားတွေအတွက် functional neuroimaging လေ့လာမှုများ (ထိုလောင်းကစားဝိုင်းပြခဲ့ကြBreiter et al, 2001), စျေးဝယ် (Knutson et al, 2007), အော်ဂဇင် (Komisaruk et al, 2004), ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း (Koepp et al, 1998; Hoeft et al, 2008) နှင့် appetizing အစားအစာ၏ရှေ့တော်၌ (ဝမ် et al, 2004a) (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ဒေသများ (ဆိုလိုသည်မှာယင်း mesocorticolimbic စနစ်နှင့်တိုးချဲ့ amygdala) ၏များစွာသောကိုသက်ဝင်Volkow et al, 2004) ။ ဤဆောင်းပါးသည်သဘာဝအားဖြင့်အားဖြည့်ဆေးများသည်အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာကူးစက်မှုကိုပလတ်စတစ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်၏မျက်နှာကိုထောက်။ , ပလပ်စတစ်ကျယ်ပြန့်အပြုအမူသို့မဟုတ်အာရုံကြော function ကိုမဆိုလိုက်လျောညီထွေ, simil အဖြစ်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မည်ဝီလျံဂျိမ်းစ်ကဖော်ပြခဲ့သောအသုံးအနှုန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ယာကုပျ, 1890). Synaptic plasticity သည်ပုံမှန်အားဖြင့် electrophysiological နည်းလမ်းများ (ဥပမာ AMPA / NMDA အချိုးပြောင်းလဲမှု) ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသော synapse အဆင့်တွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ Neurochemical plasticity သည် biochemically တိုင်းတာထားသော transmitter၊ receptor သို့မဟုတ် transporter ၏ကွဲပြားမှုများအနေဖြင့် biochemically တိုင်းတာထားသော neurotransmission (synaptic or intracellular) ကိုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။ အပြုအမူဆိုင်ရာပလပ်စတစ်မှုသည်အပြုအမူနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကိုရည်ညွှန်းသည် (ဥပမာများကိုအခန်း ၁.၁ တွင်ဆွေးနွေးထားသည်)
သဘာဝကဆုလာဘ်များ encoding ကအခြေခံကြောင်းအာရုံကြောဆားကစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် "ပြန်ပေးဆွဲ" ခံရဖို့, ဤ circuits များအတွက် plasticity သည့်အမူအကျင့် plasticity (ဆိုလိုသည်မှာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်တဏှာ) အတွက်တာဝန်ယူဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်ထင်နေကြတယ်စွဲ၏ဝိသေသ (ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002; Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Harris က, 2004; Kalivas နှင့် O 'Brien, 2008; Wanat et al, 2009b) ။ ဒီပြန်ပေးဆွဲဘို့သက်သေအထောက်အထားလှုံ့ဆျောမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်လူသိများသည်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် plasticity အတော်ကြာပုံစံများ, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ (တှငျတှေ့မွငျဖြစ်ပါတယ်Kalivas နှင့် O 'Brien, 2008; သောမတ်စ် et al, 2008; Frascella et al, 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010; ပီယပ်နှင့် Vanderschuren, 2010; ရုရှား et al, 2010) ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကျွန်တော်တို့ကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်စေဝေငှနိုငျသောလေးနက်သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုလျှပ်တစ်ပြက်ငါပေးပြီ။ မှီငြမ်းထားမှုများ (ပြောင်းလဲ neurotransmitter အဆင့်ဆင့်ကနေပြောင်းလဲဆဲလ် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုအထိRobinson နဲ့ Kolb, 2004; Kalivas et al, 2009; ရုရှား et al။ , 2010) ။ အတော်ကြာအုပ်စုများလည်း (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ (မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်ဦးနှောက်၏သော့ချက်ဒေသများတွင် Synaptic plasticity ပြောင်းလဲအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအစီရင်ခံခဲ့ကြWinder et al, 2002; Kauer နှင့် Malenka, 2007; Luscher နှင့် Bellone, 2008; သောမတ်စ် et al။ , 2008). ဖော်ပြထားသည့် neuroadaptations အများစုသည် mesocorticolimbic စနစ်နှင့်တိုးချဲ့ amygdala ၏ဒေသများ၌ရှိသည် (Grueter et al, 2006; Schramm-Sapyta et al, 2006; Kauer နှင့် Malenka, 2007; Kalivas et al။ , 2009; Koob နှင့် Volkow, 2010; ရုရှား et al။ , 2010; Mameli et al, 2011).
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိန်းညှိခြင်း၊ သဘာဝဆုလာဘ်များပြုပြင်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူများ၌ဤဒေသများ၏သိထားသည့်အခန်းကဏ္onကို အခြေခံ၍ ဤပလပ်စတစ်သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုအခြေခံသည်။ လူသားများတွင်ဤပြောင်းလဲမှုအချို့သည်ချို့ယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားခြင်း (anhedonia) နှင့်တမ်းတခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။Majewska, 1996; Bechara, 2005; O 'Brien, 2005) ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ဤပြောင်းလဲထားသောအပြုအမူများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်မှု၏သမိုင်းကြောင်းအရ neurobehavioral အစီအမံများဖြင့်လေ့လာနိုင်သည်။ (Markou နှင့် Koob, 1991; Shaham et al, 2003; Bevins နှင့် Besheer, 2005; Winstanley, 2007) ။ ဤဆောင်ရွက်ချက်များစွဲ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်မည်အကြောင်း pharmacotherapies ၏ preclinical စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်အခြေခံသည်။
မကြာသေးမီကသက်သေအထောက်အထားများအရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်ဆေးစွဲမှုသည်ရေရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက neuroadaptations များသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤပလတ်စတစ်အမျိုးအစားများသည်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်းအစီရင်ခံစာများတွင်လူ့လေ့လာမှုများမှနမူနာများလည်းပါဝင်သည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်သဘာဝဆုလာဘ်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆင်တူသည့်နည်းလမ်းများတွင်အာရုံကြောနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပလတ်စတစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။ ဤဖြစ်စဉ်၏အနာဂတ်လေ့လာမှုကကျွန်ုပ်တို့အားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းမဲ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုနိုင်သောဆေးဝါးကုထုံးများကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။Frascella et al။ , 2010).
1.1 ။ အမူအကျင့် plasticity နှင့်စွဲလမ်း၏သီအိုရီ
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနယ်ပယ်တွင်သီအိုရီအမြောက်အများပေါ်ထွက်လာပြီးအာရုံကြောနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပလပ်စတစ်ကစွဲလမ်းမှုကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုကြောင်းရှင်းပြရန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သီအိုရီတစ်ခုကမက်လုံးပေးဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် (Robinson နဲ့ Berridge, 1993, 2001, 2008) ။ တစ်ဦးကဤသီအိုရီအရ၊ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များ၏မက်လုံး - လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း (ပြောင်းပြန်သည်းခံခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အာရုံခံနျူကလိယ accumbens (NAc) dopamine (DA) လွှတ်ခြင်းဖြင့်ကမကထပြုခြင်းဖြစ်သည်။။ အမူအကျင့်တွင်၎င်းသည်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (ဆိုလိုသည်မှာအက်ကြောင်းပိုက်) နှင့်ထိတွေ့သောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလိုချင်တောင့်တခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တွဲဖက်သည့်အချက်အလက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်မက်လုံးပေးနိုင်သည်။Robinson နဲ့ Berridge, 2008) ။ locomotor နှင့်မက်လုံးပေးာင်း dissociable ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ကြောင်းပေမယ့် Locomotor ာင်းလည်း (အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်မက်လုံးပေးအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာဖြစ်နိုင်သည်Robinson နဲ့ Berridge, 2008). အထူးသဖြင့် sensitization ဖြစ်စဉ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုများအကြားလည်းဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည်။Fiorino နှင့် Phillips က, 1999; Avena နှင့် Hoebel, 2003b; Robinson နဲ့ Berridge, 2008) ။ လူသားမြားသညျတှငျ, မက်လုံးပေး-sensitive လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် dopamine အချက်ပြ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမကြာသေးမီက dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးတချို့လူနာတစ်ဦး dopamine dysregulation syndrome ရောဂါများ၏လေ့လာရေးအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဤသည် syndrome ရောဂါအတွက် (သို့မဟုတ် compulsive) တစ်ဦးဆေးဝါးကုထုံးတွေတိုးလာသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်း, စျေးဝယ်, ဒါမှမဟုတ်လိင် (အဖြစ်ကို non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အတွက်အီဗန် et al, 2006; Aiken, 2007; Lader, 2008).
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ပလပ်စတစ်သည်စွဲလမ်းမှုကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုသည်ကိုရှင်းပြရန်တီထွင်ခဲ့သည့်နောက်ထပ်သီအိုရီတစ်ခုမှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်၏သီအိုရီဖြစ်သည် (ရှောလမုန်, 1980; Koob et al, 1989; Koob နှင့် Le Moal, 2008). အတိုချုပ်, ဒီလှုံ့ဆျောမှု၏သီအိုရီထပ်ခါတလဲလဲအတွေ့အကြုံများစဉ်အတွင်းစေ့စပ်ဖြစ်စဉ်များနှစ်ခုရှိပါတယ်ဖော်ပြထားသည်: ပထမ ဦး ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် hedonic လေ့ပါဝင်ပတ်သက်, ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကိုတစ် ဦး အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ် hedonic ရုပ်သိမ်းရေး (ရှောလမုန်နှင့် Corbit, 1974) ။ အဆိုပါအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့အောက်ပါစူးရှ hedonic ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေမှဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်းခံစိတ် (နောက်ထပ် (အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကလှုံ့ဆျောလိုပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ဘယ်မှာ opiate အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောရှောလမုန်သည်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ဥပမာတစ်ခုရှောလမုန်, 1980) ။ သီအိုရီ၏ဤအစောပိုင်းဗားရှင်းမူလက ((သုံးသပ်ချက်တွေ့မူးယစ်ဆေးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲအပြုအမူရှင်းပြဖို့တီထွင်ခဲ့သည်ရှောလမုန်, 1980)) ။ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်သီအိုရီကိုချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်သောစနစ်များ၏ allostatic ပုံစံဖြစ်သည် (Koob နှင့် Le Moal, 2001, 2008) ။ B ကriefly, ဒီမော်ဒယ်ဆုလာဘ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဆုလာဘ်၏ဆန့်ကျင်သဘောတရားများကိုပါဝင်သည်, အဆုံးစွန်သောဒီပြည်နယ်သက်သာရာဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်သော, homeostatic သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်ပြန်သွားဖို့ပျက်ကွက်ပါဝငျသဖြင့်, သဘာဝဆုလာဘ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်လျှော့ချဖို့ ဦး ဆောင် (Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ ဤပြောင်းလဲနေသောအကျိုးသက်ရောက်စေသောအခြေအနေကိုထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြောပလက်တီထွင်ခြင်းအတွက်အထောက်အထားသည်dအပါအ ၀ င်တွေ့ရှိချက်များစွာမှဖြစ်သည်ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်ယူပြီးနောက် Basal NAc DA တိုးပွားလာခဲ့သည် (Weiss et al, 1992), striatal D2 အဲဒီ receptors လျော့နည်းသွားသည် striatum နှင့်လူ့အရက်နှင့် abstinent ဘိန်းဖြူစွဲ၏ accumbens (Volkow et al ။, 2004; Zijlstra et al, 2008), နှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း intracranial Self-stimulation (ICSS) တံခါးတိုးလာ (Markou နှင့် Koob, 1991) ။ mesolimbic DA အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများအပြင်, ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုလည်းစုဆောင်းနေကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများစွာကိုရုပ်သိမ်းပြီးနောက်တွင်အထူးသဖြင့်ကြံ့ခိုင်သောသာဓကမှာ hypothalamus၊ amygdala ၏အလယ်ဗဟိုနျူကလိယနှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနဗ်ကြောများတွင် CRF အချက်ပြမှုတိုးလာသည်။ (Koob နှင့် Le Moal, 2008).
စွဲလမ်းမှုကိုအထောက်အကူပေးသည့် neuroplasticity ကိုဖော်ပြရန်တတိယသီအိုရီမှာထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်အလေ့အထအခြေခံသည့် neurocircuitry ကိုစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ (Everitt et al, 2001; Everitt et al, 2008; Graybiel, 2008; Ostlund နှင့် Balleine, 2008; ပီယပ်နှင့် Vanderschuren, 2010). ဥပမာအားဖြင့်၊ လူသားမဟုတ်သောမျောက်များမှမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်သောကိုကင်းသည်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့် dopamine D2 receptor နှင့် dopamine Transporter တို့၏ပြောင်းလဲမှုများကိုကန ဦး ventral striatum ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ (Porrino et al, 2004a; Porrino et al, 2004b) ။ ဤတိုးချဲ့မှုက“ ကိုကင်း၏လွှမ်းမိုးမှုပြင်ပရှိအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအစိတ်အပိုင်းများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ကြာရှည်စွာတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှကိုကာကိုလာ၏ဘဝကဏ္ over အားလုံးအပေါ်ကိုကင်း၏လွှမ်းမိုးမှုကိုဖြစ်စေသောအရာငယ်များနှင့်သေးငယ်လာသည်” ဟုအကြံပြုထားသည်။Porrino et al ။, 2004a). ventral မှ dorsal striatum သို့တိုးတက်သောဤပလပ်စတစ်သည်ရည်မှန်းချက်မှအလေ့အထအခြေခံသင်ကြားမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာဟောင်းအဟောင်းနှင့်တူညီသည်။ (Balleine နှင့် Dickinson, 1998) နှင့် striatum ၏တိုးတက်သောပိုပြီး dorsal ရှုထောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိုးချဲ့ဆုလာဘ် -based သင်ယူမှု၏စွမ်းရည်ကိုထောကျပံ့ထားတဲ့ခန္ဓာဗေဒဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ (ရှိ et al, 2000).
2 ။ စားနပ်ရိက္ခာဆုကြေး
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးကျယ်ကျယ်လေ့လာခဲ့ဆုလာဘ်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာအများအပြားကြွက်လေ့လာမှုများအတွက် quintessential ချသောဆုဖြစ်၏နှင့် (ထိုကဲ့သို့သောအော်ပရေတာ (Self-အုပ်ချုပ်ရေး) တာဝန်များကို, လေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်မှု, ဝင်္သင်ယူမှု, လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို, ရပျရပျအေးစက်အဖြစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်စစ်ကူအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်Skinner, 1930; Ettenberg နှင့်စခန်း, 1986; Kandel et al, 2000; ကယ်လီ, 2004; Tzschentke, 2007; ဇေဘတို့ကို et al, 2009) ။ မူးယစ်ဆေးသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံရရှိရန်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြကြောင်းကြွက်များတွင်ထိုကဲ့သို့သကြားနဲ့ saccharin အဖြစ်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ (ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချရန်ပြသခဲ့ကြသည်ကာရိုး et al, 1989; Lenoir နှင့် Ahmed က, 2008), နှင့် ဤသဘာ ၀ အားဖြည့်ဆေးများသည်စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ကြွက်များအများစုတွင်ကိုကင်း၏ရွေးချယ်မှုအားကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင်မပြည့်မီကြောင်းပြသခဲ့သည် (Lenoir et al, 2007; Cantin et al, 2010). ဤအချက်ကချိုသောအစားအစာများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏သမိုင်းကြောင်းရှိသည့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်ပင်ကိုကင်းထက်ပိုမိုအားဖြည့်တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည် (Cantin et al ။, 2010). ဤဖြစ်စဉ်သည်ကိုကင်းဆေးစွဲမှု၏အားနည်းချက်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းကြွက်လူနည်းစုသည်ကိုကင်းကိုသကြား (သို့) saccharin ထက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ (Cantin et al ။, 2010) ။ ဤတိရိစ္ဆာန်များလူ့အခွအေနေမှပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာသော "အားနည်းချက်" လူဦးရေကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်ဟူသောအယူအဆကိုပိုဆွေးနွေးချက် (ပုဒ်မ 6.1) တွင်စူးစမ်းနေပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်းများစွာမှပြုလုပ်သောအလုပ်သည်အရသာရှိသောအစားအစာကိုရရှိပြီးနောက်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောဆားကစ်များတွင်ပလတ်စတစ်ပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။ အရသာခံအစားအစာစားသုံးမှု၏သမိုင်းအပြီးတွင် Neurobehavioral adaptations ကိုအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအပြီးလေ့လာတွေ့ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်များကအစားအစာစားသုံးမှုကိုပုံမှန်မထိန်းချုပ်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်တူနိုင်သည်ဟုအဆိုပြုထားသည်။ (Hoebel et al, 1989; le Magnen, 1990; ဝမ် et al ။, 2004b; Volkow နှင့်ပညာရှိ, 2005; Davis ကနှင့် Carter က, 2009; Nair et al, 2009a; Corsica နှင့် Pelchat, 2010) ။ Bartley Hoebel ၏ဓာတ်ခွဲခန်း (သူနဲ့သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွဲများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကိုသကြားစားသုံးမှုအဆိုတင်သွင်းဖို့ဦးဆောင်သည့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြား access ကိုတစ်သမိုင်းအောက်ပါအပြုအမူ plasticity သရုပ်ပြကျယ်ပြန့်ဒေတာ, ရှိပါတယ်Avena et al, 2008) ။ ဒီအယူအဆကထောက်ခံသည် ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အောက်ပါမြင်တွေ့ခဲ့သည့်ပလပ်စတစ်ဥပမာများစွာမှာသကြားသာမကအဆီကိုပါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထွက်လာခြင်းကြောင့်လည်းတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးမျိုးသောအာဟာရရှိသောအစားအစာအမျိုးအစားများသည်ပလပ်စတစ်ကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုခြင်း၊ သကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်း၊ အဆီဓာတ်မြင့်မားခြင်းနှင့်“ အနောက်တိုင်း” သို့မဟုတ်“ ကော်ဖီတာယာ” အစားအစာများကို အသုံးပြု၍ လူတို့၏မတူကွဲပြားသောစားသုံးမှုပုံစံများကိုကြိုးစားပုံဖော်ခဲ့သည်။
သကြားဓာတ်ထပ်ခါတလဲလဲဝင်ရောက်စဉ် စားသုံးမှု၏တင်းမာမှုလေ့လာသည် (Colantuoni et al, 2001), တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းယခင်က (ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်Ahmed ကနှင့် Koob, 1998; ရောဘတ် et al, 2007) ။ စက်လှေကားထပ်ခါတလဲလဲအစည်းအဝေးများတစ်သမိုင်းပြီးနောက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ကနဦးအဆင့်တွင် (ကခြောက်လနာရီ session ရဲ့ဥပမာကိုပထမဦးဆုံးနာရီ) ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစားသုံးမှုအတွက်တိုး, မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏လူ့ပုံစံများတူတဲ့မှထင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း (ဖြစ်ပါတယ်Koob နှင့် Kreek, 2007).
သကြားသို့မဟုတ်အဆီဝင်ရောက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများအပါအဝင်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာသည် (Colantuoni et al, 2002; Teegarden နှင့်ဘေးလ်, 2007).
ဤ“ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း” ကာလပြီးနောက်၊ operant စမ်းသပ်ခြင်းသည်သကြားအတွက်“ တဏှာ” နှင့်“ ရှာဖွေခြင်း” အပြုအမူကိုဖော်ပြသည် (Avena et al, 2005) သို့မဟုတ်အဆီ (အခန်း et al, 2007), လည်းပဲ တဏှာ၏ပေါက်ဖွား"(Grimm et al, 2001; Lu et al, 2004; Grimm et al, 2005), နှင့် "relapse" (Nair et al, 2009b) သကြားကနေ abstinence အောက်ပါ။
တကယ်တော့တစ် ဦး ပေးထားသည့်အခါ abstinst ကာလပြီးနောက်သကြားဓာတ်ကိုပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များသည်ပိုမိုများပြားသောပမာဏကိုစားသုံးသည်ယခင်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းထက်သကြား t ကို (Avena et al ။, 2005) ။ ဤသည်ဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမူလက (အရက်များအတွက်ဖော်ပြထားခဲ့သည်Sinclair နှင့် Senter, 1968), နှင့်တဏှာနှင့် relapse ၏အခြား preclinical မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့ထင်နေသည် (McBride နဲ့ Li, 1998; Spanagel နှင့် Holter, 1999).
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့ပြီးနောက်၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသော်လည်းအစားအစာရှာဖွေခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (Teegarden နှင့်ဘေးလ်, 2007; ဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny, 2010), လူ့စွဲတွင်တွေ့မြင်မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ဝယ်ယူများအတွက်တိရိစ္ဆာန်စောဒနာ (အဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီရာDeroche-Gamonet et al, 2004).
အစားအစာကြောင့်သွေးဆောင်ပလတ်စတစ်၏နောက်ထပ်အရိပ်အယောင်တစ်ခု "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive"ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုနှင့် psychostimulants အကြား locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ကုသမှုဖြစ်စေနိုင်ရန်အတွက်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ (Avena နှင့် Hoebel, 2003b, a; Gosnell, 2005) ။ cross-sensitive တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ် pharmacological အေးဂျင့်တစ်ခုတိုးမြှင်တုံ့ပြန်မှု (ပုံမှန်အား locomotor) (မှုကြောင့် (အသီးသီးထိုကဲ့သို့သောဖိအားသို့မဟုတ် psychostimulant ကဲ့သို့) တစ်ခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ် pharmacological အေးဂျင့်မှအောက်ပါယခင်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်Antelman et al, 1980; O'Donnell နှင့် Miczek, 1980; Kalivas et al, 1986; Vezina et al, 1989). psychostimulants ပါဝင်သော sensitization ဖြစ်စဉ်များ mesolimbic DA အာရုံခံပါဝင်ပတ်သက်နှင့် Cross- sensitization လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုအကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏ဘုံယန္တရားများမှဖြစ်ပေါ်သည်ဟုယုံကြည်နေသည် (Antelman et al ။, 1980; Herman et al, 1984; Kalivas နှင့် Stewart က, 1991; ကိုယ်ပိုင်နှင့် Nestler, 1995).
စိတ်ရောဂါကုသမှုကို cross-sensitization perinatal နှင့် weanlele ကာလအတွင်းသကြား / အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာစားသုံးမိသောတိရစ္ဆာန်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။s ကို (Shalev et al, 2010) ။ မြင့်မားသောအဆီအစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့မှုရှိလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး၏ "ကြိုး" (အားဖြည့်) သက်ရောက်မှုများ, Davis က et al ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များတစ် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်း ( အသုံးပြု. စိတ်ကြွဆေးမှပြောင်းလဲ sensitivity ကိုအဘို့အမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာကျွေးမွေးDavis က et al, 2008) ။ ဤပုံစံတွင်တိရိစ္ဆာန်များသည်အခန်းငယ်တစ်ခုစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်အာရုံ၊ ထိတွေ့နိုင်သောနှင့် / သို့မဟုတ်မုန်းတီးမှုရှိသည့်စစ်ဆေးခန်း (multi-chamber) ယန္တရားကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်နေစဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲ၌ချုပ်နှောင်ထားပြီးဆုတစ်ခု (ဥပမာအမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အခန်းထဲရှိအစာ) နှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားအစည်းအဝေးများထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ (ဥပမာဆားဆေးထိုးသို့မဟုတ်အစားအစာမရှိ) နှင့်အတူယန္တရား၏အခြားအခန်းထဲမှတွဲဖက်ပါဝင်သောအေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူရောနှောနေကြသည်။ စမ်းသပ်မှုအဆင့်ကိုကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တူညီသောအခြေအနေများတွင်ပြုလုပ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုများနှင့်တွဲဖက်ထားသောအခန်းကိုသိသိသာသာ ဦး စားပေးသည့်အခါ CPP ကိုပြသသည်။ Davis က et al ။ အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာကျွေးသောကြွက်များသည်အမ်ဖီတမင်းအတွက်အခင်းအကျင်းနေရာကို ဦး စား ပေး၍ မရရှိနိုင်ကြောင်း၊ (Davis က et al ။, 2008).
ထုတ်ယူခြင်းသည်အလွန်အရသာရှိသောအစားအစာများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်တွင်တွေ့မြင်ရသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ naloxone မိုးရွာသွန်းမှု opiate ဆုတ်ခွာနှင့်အတူလေ့ဆက်စပ်သောထုတ်ယူ၏ Somatic ဆိုင်းဘုတ်များလည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားပြီးနောက် (naloxone သို့မဟုတ်အစားအစာကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် precipitated နိုင်ပါသည် (Colantuoni et al ။, 2002) သို့မဟုတ်တစ်ကော်ဖီဆိုင်စတိုင်အစားအစာ (le Magnen, 1990).
ကိုကင်း၊ အရက်၊ အမ်ဖီတမင်းနှင့်နီကိုတင်းမှနှုတ်ယူပြီးနောက်တွင်လေ့ကျင့်လေ့ရှိသော ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည့်ဆုအတွက်မြင့်မားသောတံခါးခုံများ (Simpson နှင့် Annau, 1977; Cassens et al, 1981; Markou နှင့် Koob, 1991; Schulteis et al, 1995; ပညာရှိ Munn, 1995; Epping-ယော်ဒန်မြစ် et al, 1998; Rylkova et al, 2009), ပုံမှန် chow အပြင်ကော်ဖီဆိုင်အစားအစာကိုရက်ပေါင်း ၄၀ ကြည့်ရှုပြီးနောက်ကြွက်များတွင်တွေ့ရှိရသည်။ နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားတဲ့အဆီအစားအစာရုပ်သိမ်းပြီးနောက်အနည်းဆုံး 14 ရက်ဆက်ရှိနေ (ဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny, 2010) ။ ဤသည်အတိုင်းအတာလေ့တစ်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည် endogenous ဦး နှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များ၏အနိမ့်သေံအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဆွေမျိုး anhedonia ၏ပြည်နယ် (Kenny, 2007; ပညာရှိ 2008; Bruijnzeel, 2009; Carlezon နှင့်သောမတ်စ်, 2009) နှင့်ငါဤအခြေအနေကိုသက်သာစေရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (နှင့်အစားအစာများ) ကိုဆက်လက်သုံးစွဲမှုကိုထိန်းညှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ (ဝါ et al, 2008; Koob, 2010).
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပလပ်စတစ်အပြင်အစားအစာအချို့ကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းသည်လည်း neurochemical plasticity နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့် dopamine နှင့် opioid အချက်ပြမှုသည်သကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်း (သို့) အဆီမြင့်မားသောအစားအစာများကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဝင်ရောက်ခြင်းအရလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။. NAc တွင်သကြားနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုနှင့်အတူပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတိုက်ကျွေးခြင်းဖြစ်စဉ်များသည် D1 နှင့် D3 receptor ပါဝင်မှုကိုတိုးစေသည် (mRNA သို့မဟုတ်ပရိုတိန်းဖြစ်စေ)၊ အဆိုပါ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက် D2 receptors လျော့ကျနေစဉ် (Colantuoni et al။ , 2001; Bello et al, 2002; Spangler et al, 2004) ။ ကြွက်များတွင်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာကိုတိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့်အတူဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် အပြင်းထန်ဆုံးကြွက်များတွင်ဖြစ်ပွား D2 ၌အကြီးမြတ်ဆုံးကျဆင်းခြင်း (ဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny, 2010) ။ ဤရွေ့ကား accumbal နှင့် striatal dopamine receptors အတွက်လိုက်လျောညီထွေကြွက်များတွင်တွေ့မြင်သူများနှင့်ထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်သို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက် (Alburges et al, 1993; Unterwald et al, 1994a; Spangler et al, 2003; Conrad et al, 2010) ။ ထို့ပြင် striatal D2 receptors အတွက်လျှော့ချလည်း (လူ့ psychostimulant အသုံးပြုသူများနှင့်အရက်သမားတွင်တွေ့မြင်နေကြVolkow et al, 1990; Volkow et al, 1993; Volkow et al, 1996; Zijlstra et al။ , 2008), နှင့်အဝလွန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်, D2 အကြောင်းအရာအနုတ်လက္ခဏာခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (ဝမ် et al။ , 2004b) ။ Endogenous opioid အချက်ပြလည်း (အစားအစာတို့ကအလှနျထိခိုက်နေသည်Gosnell နှင့် Levine, 2009). ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားသို့မဟုတ်ချိုမြိန်သောအဆီဓာတ်သည် mu opioid receptor ကိုပိုမိုစည်းနှောင်စေသည် အဆိုပါ NAc အတွက်, cingulate cortex, hippocampus နှင့် locus coeruleus (Colantuoni et al။ , 2001) နှင့် NAc အတွက် enkephalin mRNA လျော့ကျ (ကယ်လီ et al, 2003; Spangler et al။ , 2004) ။ mesolimbic DA နှင့် opioid အချက်ပြအတွက် Neurochemical plasticity လည်းအမျိုးသမီးကြွက်၏သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့ပြီး (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မြင့်မားတဲ့အဆီအစားအစာကျွေးမွေးVucetic et al, 2010) ။ ဤရွေ့ကားအမျိုးအနွယ် (က, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် NAc dopamine Transporter (DAT) ခြီးမွှောနှင့် prefrontal cortex (PFC), နှင့် NAc နှင့် PFC အတွက် preproenkephalin နှင့် mu opioid receptors တိုးလာကြပါပြီVucetic et al။ , 2010) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဤပြောင်းလဲထိခိုက်ယင်းပရိုတိန်းအားလုံးအတှကျကမကထဒြပ်စင်၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံ (hypomethylation) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆီအမြင့် / သကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့် corticotropin-releasing factor (CRF) စနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဝေငှသူများအားလည်းသတိရစေသည်။ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာမှ ၂၄ နာရီရုပ်သိမ်းပြီးနောက်အမိဂဒလာရှိ CRF တိုးလာသည် (Teegarden နှင့်ဘေးလ်, 2007) ။ preclinical မော်ဒယ်များအတွက်, ဒီပြောင်းလဲ CRF အချက်ပြအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအခြေခံမှထင်နှင့်အီသနော၏ "မူးရူး" စားသုံးမှု (တိုးပွါးKoob, 2010) ။ ရလဒ်အဖြစ် CRF ရန် (ထိုအရက်၏ကုသမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းများအတွက်အဆိုပြုထားလျက်ရှိSarnyai et al, 2001; Koob et al, 2009; Lowery နှင့်သီရဲလ်, 2010) ။ ဤအအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး, CRF ရန်လည်းတစ်ဦးချင်းစီဟာကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အစားအစာတစ်ခုအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းမြင့်မားသောအဆီ / အမြင့်ဆုံးသကြားပါတဲ့အစားအစာကနေ abstinent ရှိနေဆဲကူညီဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်အချက်များတိုက်ရိုက်ဗီဇစကားရပ် (ထိခိုက်ခြင်းဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအမြဲတည်သောသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရမော်လီကျူး၏အခြားလူတန်းစားများမှာMcClung နှင့် Nestler, 2008). အစားအစာသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပလပ်စတစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံရာတွင်ကူးယူထားသောအချက်များသည်လည်းအစားအစာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်မြင့်မားစွာစားခြင်းမှနုတ်ထွက်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီနှင့် ၁ ပတ်လုံးအနေဖြင့် NAc phospho-CREB ကို ၂၄ နာရီလျှော့ချပြီးအဆီဓာတ်မြင့်မားသောအဟာရမှနှုတ်ထွက်ပြီးနောက် ၂၂ နာရီနှင့် ၁ ပတ်လုံးနေစဉ်၊ (Teegarden နှင့်ဘေးလ်, 2007) သို့မဟုတ် sucrose (Wallace et al, 2008) ။ အဆိုပါ NAc ခုနှစ်, phospho-CREB လည်း (စိတ်ကြွဆေးနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာ၏ကာလအတွင်းမှာရှုမြင်လျော့နည်းသွားMcDaid et al, 2006a; McDaid et al, 2006b), နှင့်ကိုကင်း၊ နီကိုတင်း၊ အီသနောနှင့်ဖီလိုစီလီဒီဒင်တို့အပြင်ဤဆေးများမှနှုတ်ယူပြီးနောက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ FosB ကိုလည်းတိုးပွားလာသည်။ (McClung et al, 2004; McDaid et al။ , 2006a; McDaid et al။ , 2006b). ventral striatum တွင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ FosB ကိုအလွန်အကျွံထုတ်ဖော်ခြင်းသည်အစားအစာရရှိရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုအပြုအမူတိုးမြှင့်ရာတွင်သူတို့၏အဆိုပြုထားသည့်အခန်းကဏ္နှင့်ဆင်တူသည်၊ (Olausson et al, 2006) နှင့်သန္ဓေတား (Wallace et al။ , 2008).
စွဲ-related circuitry အတွက် Synaptic plasticity ချိတ်ဆက်ထားသည် Vivo အတွက် အလွဲသုံးစားမှုမြောက်မြားစွာမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး။ အဆိုပါ VTA ခုနှစ်, စွဲလမ်းအများအပြားအတန်း, ဒါပေမယ့်မရ Non-စွဲလမ်း psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ (Synaptic plasticity သွေးဆောင်Saal et al, 2003; Stuber et al, 2008a; Wanat et al, 2009a) ။ ယနေ့အထိတိုက်ရိုက်စွဲ-related neurocircuitry အတွက် Synaptic plasticity အပေါ်အစားအစာများ၏သက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်းအနည်းငယ်သာဒေတာရှိပါတယ်။ အစားအစာ (Chow သို့မဟုတ် sucrose လုံးလေးများ) နဲ့ဆက်စပ်အော်ပရေတာသင်ယူမှု (လေ့ကျင့်ရေးအောက်ပါအထိခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ventral tegmental ဧရိယာ၌ AMPA / NMDA အချိုးတိုးလာChen က et al, 2008a). ကိုကင်းကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုံးလအထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကိုကင်းကို passive Administration ဖြင့်မတွေ့ရပါ။ (Chen က et al။ , 2008a) ။ အဆိုပါ VTA အတွက်သေးသေးလေး EPSP အကြိမ်ရေလည်း (glutamatergic အချက်ပြအကျူးနဲ့ post-Synaptic ခိုင်ခံ့စေ၏ကြောင်းအကြံပြု sucrose (သို့သော် Chow မဟုတ်) Self-အုပ်ချုပ်ရေး, အောက်ပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါအထိသုံးလအဘို့အတိုးများနှင့်ဖွင့်ရန်သုံးပတ်ခဲ့သည်Chen က et al။ , 2008a).
ဤအချက်အလက်များက mesolimbic system (ဥပမာ AMPA / NMDA အချိုး) တွင် synaptic plasticity ၏အချို့သောတိုင်းတာမှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် appetitive learning နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုအကြံပြုသည်။ Pavlovian သည်အစားအစာဆုနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာသင်ယူမှုသည် VTA LTP ကို ​​၀ ယ်ယူစဉ် (အေးခဲခြင်းနေ့ ၃) တွင်ဤအချက်ကိုထောက်ခံသည်။Stuber et al, 2008b) ။ plasticity အထောက်အထားနေ့က3အပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း, က Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ထင်ရှားစွာ (ဤ circuits များပိုမိုမွဲ plasticity မှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြု, နှစ်ရက်အကြာတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့Stuber et al။ , 2008b) ။ အဆိုပါ VTA အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်း-သွေးဆောင် plasticity လည်းခဏတာဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည် (လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ် plasticity များအတွက်အမှုဖြစ်ပေါ်လာသောBorgland et al, 2004; Chen က et al။ , 2008a) ။ ဤအအော်ပရေတာလေ့လာမှုများ၏သဘောသဘာဝ, သို့သော်, အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး Synaptic plasticity ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်နိုင်သည်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်တိုးချဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလျော့မပေးပါဘူး။ ပုံမှန်အော်ပရေတာအေးစက်လေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များအခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးသို့မဟုတ်အချိန်ကာလသတ်မှတ် access ကိုစဉ်အတွင်းထက်အစားအစာဆုလာဘ်များစွာလျော့နည်း access ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ Synaptic plasticity အပေါ်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာထပ်တိုးခွင့်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
3 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး
လိင်အများကြီးအစားအသောက်လိုပဲတစ်မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုများအတွက်အရေးပါကြောင်း, တစ်ဦးဆုလာဘ်ပါပဲ။ အလွဲသုံးစားမှုအစားအစာနှင့်အများအပြားမူးယစ်ဆေးလိုပဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (mesolimbic DA elevatesMeisel et al, 1993; Mermelstein နှင့် Becker က, 1995) ။ ဒါဟာ (ကိုလည်းအော်ပရေတာများက value ကိုအားဖြည့်များ၏စည်းကမ်းချက်များကိုတိုင်းတာခဲ့ပြီးတဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်သဲသောင်ပြင်များနှင့်ဂျော်ဒန်, 1956; Caggiula နှင့် Hoebel, 1966; Everitt et al, 1987; ခရော et al, 1993) နှင့်အေးစက်နည်းလမ်းများနေရာ (သိပ်မရှိပါဘူးနှင့် Vazquez, 1999; Martinez နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2001; Tzschentke, 2007). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှုခံယူသူများတွင် DSM-IV ရှိ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါမပါ ၀ င်ပါ” ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများစွာရှိသည်။ အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ အကျိုးဆက်များ (Orford, 1978; ရွှေနှင့် Heffner, 1998; Garcia ကနှင့် Thibaut, 2010) ။ အပြုအမူ၌ဤလိုက်လျောညီထွေထည့်သွင်းစဉ်းစား, mesocorticolimbic circuitry အတွင်းဖြစ်ပေါ်သိသိသာသာ neuroadaptations စိတ်ကူးဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲသကြားဓာတ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူတွေ့ရသည့်အတိုင်း, ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ locomotor assay အတွက် amphetamine နှင့်အတူ Cross- sensitized (အိုး et al, 2010a). ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါပိုမိုများပြားလာပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုကိုအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိစေရန်အကြံပြုသည်။ (Wallace et al။ , 2008; အိုး et al, 2010b). ထို့အပြင်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အာရုံခံသက်ရောက်မှုဆင်တူသည် (Segal နဲ့ကထပ်လောင်း, 1974; Robinson နဲ့ Becker က, 1982; Robinson နဲ့ Berridge, 2008), ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းများသည် NAc DA တုံ့ပြန်မှုကိုနောက်ပိုင်းတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုသိရှိစေသည် (Kohlert နှင့် Meisel, 1999). အမ်ဖီတမင်းအုပ်ချုပ်မှု၏သမိုင်းသည်လိင်အပြုအမူများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး NAc DA တွင်တိုးပွားမှုတိုးပွားစေသည်။ (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999).
Aအစားအစာဆုအတွက်ဖော်ပြထားသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ပလတ်စတစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်ပြသည့်ကက်စကိတ်များကိုစတင်လုပ်ဆောင်စေနိုင်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကျင့်ကိုကူးယူပြီးနောက် delta FosB သည် NAc, PFC, dorsal striatum နှင့် VTA တို့တွင်ကူးယူထားသောအချက်ဖြစ်သည်။ (Wallace et al။ , 2008; အိုး et al။ , 2010b). မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB တွင်ဤသဘာဝတိုးများလာခြင်း (သို့) NAc အတွင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ FosB ကိုဗိုင်းရပ်စ်အလွန်အကျွံဖိအားပေးခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြောင်းလဲစေပြီး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏ NAc ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဤအပြုအမူကိုလျော့ပါးစေသည်။ (ခွံ et al, 2009; အိုး et al။ , 2010b) ။ ထို့ပြင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတွဲကာပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ခွံ et al။ , 2009).
အဆိုပါ MAP kinase အချက်ပြလမ်းကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံစဉ်အတွင်းစေ့စပ်ကြောင်းပလပ်စတစ် -related လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ် (Bradley et al, 2005) ။ ငါexperienced လိင်အတွေ့အကြုံရှိသောအမျိုးသမီးများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုများက NAc တွင် pERK2 ကိုမြင့်တက်စေသည် (Meisel နှင့် Mullins, 2006). NAc pERK ၏တိုးပွားမှုသည်အလွဲသုံးစားမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ သို့သော်စွဲခြင်းမရှိသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ NAc ERK ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ပလပ်စတစ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ (Valjent et al, 2004). နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ pERK သည် NAc, basolateral amygdala နှင့် anterior cingulate cortex ၏တူညီသောအာရုံခံဆဲလ်များ၌လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းအားဖြင့်ယခင်က methamphetamine အားဖြင့် activated လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (Frohmader et al, 2010). ဤထူးခြားသောရွေးချယ်မှုက NAc နှင့်အခြား mesocorticolimbic ဒေသများရှိဤအချက်ပြအဆငျ့အလှကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အနာဂတ်တွင်အစာစားလိုသောအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်ပလပ်စတစ်ကို ဦး တည်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည် (Girault et al, 2007).
mesocorticolimbic system တွင်အာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအရပြောင်းလဲသွားသည်။ အိုးနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမှ“ ဆုတ်ခွာ” စဉ်အတွင်းကြွက်များတွင် dendrites နှင့် dendritic spines များကြွက်များတွင်တိုးများလာကြောင်းမကြာသေးမီကအစီရင်ခံခဲ့သည်။ (အိုး et al။ , 2010a) ။ T ကသူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကိုထပ်တလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထပ်တူထပ်မျှပြောင်းလဲခြင်းကိုပြသနိုင်သည့်အခြားဒေတာများကိုလည်းသူတိုးချဲ့ခဲ့သည် (Fiorino နှင့် Kolb, 2003; Robinson နဲ့ Kolb, 2004; Meisel နှင့် Mullins, 2006).
4 ။ လေ့ကျင့်ခန်းဆုကြေး
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြေးဘီးဖို့ Access ကို (ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်အတွက်စစ်ကူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်Belke နှင့် Heyman, 1994; Belke နှင့် Dunlop, 1998; လက်တ et al, 2000). အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အခြားသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများနည်းတူကြွက်များတွင်လေ့ကျင့်ခန်းသည် NAc နှင့် striatum တွင် DA အချက်ပြမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (လွတ်မြောက်ပြီနှင့် Yamamoto, 1985; Hattori et al, 1994). လေ့ကျင့်ခန်းသည်လူနှင့်ကြွက်များတွင် endogenous opioids ၏ ဦး နှောက်နှင့်ပလာစမာအဆင့်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည် (ခရစ်နှင့် Chesher, 1982; Janal et al, 1984; Schwarz နှင့် Kindermann, 1992; Asahina et al, 2003). ဤ opioids ၏ပစ်မှတ်တစ်ခုမှာ mu opiate receptor၊ ဘိန်းဖြူနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွှာဖြစ်သည်။ ဤထပ်တူကျမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုအလွဲသုံးစားပြုသည့်တုန့်ပြန်မှုများအထိသက်ရောက်နိုင်သည်။ လေ့လာသူအများစုသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းလေ့လာမှုအများစုမှတွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်မော်ဖင်းအကိုက်၊ အီသနောနှင့်ကိုကင်းတို့ကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချသည် (Cosgrove et al, 2002; Smith က et al, 2008; Ehringer et al, 2009; Hosseini et al, 2009) ။ လေ့ကျင့်ခန်းအတှေ့အကွုံ (MDMA နှင့်ကိုကင်းဖို့ CPP က attenuated နှင့်လည်း NAc DA အတွက် MDMA တိုးလျှော့Chen က et al, 2008b; Thanos et al, 2010) ။ ကိုကင်း၏ဤလေ့လာမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် (ထိခိုက်မခံခဲ့ရပေမယ့်ကြိုတင် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးမှလေ့ကျင့်ခန်းလည်းမူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် reinstatement လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့Zlebnik et al, 2010) ။ အလားတူလေ့လာမှုမှာ, ကိုကင်းရှာခြင်းနှင့် cue reinstatement (မူးယစ်ဆေး abstinence တစ်ကာလအတွင်းကျင့်သုံးကြောင်းကြွက်များတွင်လျှော့ချခဲ့သည်Lynch et al, 2010) ။ ငါဘီးအတွေ့အကြုံရှိသည့်တိရိစ္ဆာန်များ၊ ဘီးဝင်ပေါက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောလက္ခဏာများ၊ စိုးရိမ်စိတ်များတိုးပွားလာခြင်းနှင့် naloxone-precipitated withdrawawa ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ဌ (Hoffman ဟာ et al, 1987; Kanarek et al, 2009).
အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများပြောင်းလဲခြင်းအပြင် striatum နှင့် NAc များတွင် dynorphin များပြားလာခြင်းအားဖြင့်အာရုံကြောဓာတုပလတ်စတစ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကိုကင်းကင်း၊ (Lindholm et al, 2000; Werme et al, 2000; Wee နှင့် Koob, 2010). ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောပလပ်စတစ်ကိုပြန်လည်သတိရစေခြင်း၊ (Werme et al, 2002) ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (ယခင် access ကိုအတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဘီး access ကိုပြေး၏ဖယ်ရှားရေးအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း "ရုပ်သိမ်းရေး" ၏ပြည်နယ်အခြေခံစခွေငျးငှါHoffman ဟာ et al။ , 1987; Kanarek et al။ , 2009). အပြန်အလှန်အားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနေစဉ်လေ့ကျင့်ခန်းသည် PFC ရှိ ERK ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ (Lynch et al။ , 2010). ဤသည်သည်စွဲလမ်းမှု၏များစွာသောရှုထောင့်များတွင် ERK ၏အခန်းကဏ္consideringကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အထူးသက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်n (Valjent et al။ , 2004; Lu et al, 2006; Girault et al။ , 2007) နှင့် PFC အတွင်း ERK activation မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ပေါက်ဖွားနှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိချက် (Koya et al, 2009). dopamine D2 receptor ၏ striatal level ကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသည်နှင့်ထပ်တိုးရန်အစီရင်ခံသည် (MacRae et al, 1987; Foley နှင့် Fleshner, 2008), ကဆနျ့ကငျြတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကြွက်, မျောက်ဝံများနှင့်လူသားတွေအတွက် psychostimulant Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိVolkow et al။ , 1990; Nader et al, 2002; Conrad et al။ , 2010) ။ ဤအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / စွဲလမ်းပတ်သတ်ပြီးအတွက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု "အကာအကွယ်" အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအယူအဆများအတွက်ပံ့ပိုးမှုအစောပိုင်းကဤအပိုင်းကိုလေ့ကျင့်ခွင့်ပြုခဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြုစုလျက်, reinstatement လျှော့မူးယစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးသရုပ်ပြတှငျဖျောပွထားလေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာသည်။ နှစ်ဦးစလုံးစစ်ကူ (တစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်သောအခါဘီးပြေးစိတ်ကြွဆေးစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသကဲ့သို့, လေ့ကျင့်ခန်း "ကိုထုတ်-အားပွို" မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတတ်နိုင်သမျှကူညီပံ့ပိုးလည်းရှိပါသည်Kanarek et al, 1995).
လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း (မြင့်မားသော LTP နှင့်တိုးတက်လာသော Spatial သင်ယူမှုတွင်ထင်ဟပ်) plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့် neurogenesis နှင့်အတော်ကြာ plasticity-related မျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး (တိုးပွါးရှိရာ hippocampus, အတွင်းသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Kanarek et al။ , 1995; ဗန် Praag et al, 1999; ဂိုမက်ဇ-Pinilla et al, 2002; Molteni et al, 2002) ။ လျော့နည်းသွား hippocampal neurogenesis preclinical လေ့လာမှုများအတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Duman et al, 1999; Sahay နှင့် Hen, 2007), နှင့် hippocampal neurogenesis တိုးမြှင့်ဖို့တစ်စွမ်းရည်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, လေ့ကျင့်ခန်း (ကြွက်တစ်စိတ်ကျရောဂါအညီလက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့ပြီးBjornebekk et al, 2006), နှင့်လူ့လူနာအတွက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်စေရန် (Ernst et al, 2006) ။ (hippocampal neurogenesis ၏ဖိနှိပ်မှုများနှင့်တိုးမြှင့်ကင်းစားသုံးမှုအကြားမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည် link ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံလမ်းပြ Noonan et al, 2010) စိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှု (hippocampal neurogenesis လျော့နည်းစေတဲ့ကုသမှု), (မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတိုးပွါးကြောင်းယခင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူCovington နှင့် Miczek, 2005), က mesolimbic function ကိုအပေါ်ရှိသူများအပြင် hippocampal function ကိုအပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း (ဆိုလိုသည်မှာ hippocampal) နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကျရောဂါ-related circuitry အတွက် plasticity မှဦးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံဆက်စပ် circuitry သောကြောင့် (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ mesolimbic သည့်စနစ်), ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှုများတည်ရှိသည် "ရှာကြံဆန့်ကျင်မူးယစ်ဆေး '၏ရှိရာတိကျသော locus ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသည်အပြေးသည်သဘာဝအားဖြည့်ဆေးကြောခြင်းကို ဦး စား ပေး၍ လျော့ချနိုင်သည့်အထောက်အထားများရှိသည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအစားအစာရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ဘီးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သွားနိုင်သောကြွက်များသည်သေသည်အထိအစာမစားတော့ပါ (Routtenberg နှင့် Kuznesof, 1967; Routtenberg, 1968) ။ ဤသည်အစွန်းရောက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုထိတွေ့မူးယစ်ဆေးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ယေဘုယျထုံးစံ၌လှုံ့ဆျောမှုလျော့ကျစေနိုင်တယ်အကြံပြုနိုင်ပေမယ့်အစားအစာရရှိမှု၏ကာလကိုတစ်ပြေးဘီးမှဆက်လက်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှသာကြည့်ရှုလေ့လာသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှု၏နောက်ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားတိရစ္ဆာန်လှောင်အိမ်အတွင်းသျောတစ်ပြေးဘီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်တဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် (EE သျောတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်း) လုံးဝလေ့ကျင့်ခန်းကနေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင် dissociate ဖို့ခက်ခဲပြီးနေစဉ်, EE နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း၏ dissociable သက်ရောက်မှု (သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြဗန် Praag et al။ , 1999; Olson et al, 2006).
5 ။ အသစ်အဆန်း / အာရုံခံစိတ်ကြွဆေး / ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကြွယ်ဝစေ
အသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၊ အာရုံခံနိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်တို့သည်ကြွက်များအပါအ ၀ င်တိရိစ္ဆာန်များကိုအားဖြည့်ပေးသည် (van de Weerd et al, 1998; Besheer et al, 1999; Bevins နှင့် Bardo, 1999; Mellen နှင့် Sevenich MacPhee, 2001; Dommett et al, 2005; ကာဣန et al, 2006; Olsen နှင့် Winder, 2009). အသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်စင်မှု (EE) များသည် mesolimbic DA system ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားကြောင်းပြသပြီးဖြစ်သည်။ (Chiodo et al, 1980; ဟွမ် et al, 1997; Rebec et al, 1997a; Rebec et al, 1997b; သစ်သားနှင့် Rebec, 2004; Dommett et al။ , 2005; စီဂိုဗီယာ et al, 2010), စွဲ circuitry နှင့်အတူထပ်တူအကြံပြုခြင်း။ လူ့လူဦးရေအတွက်, အာရုံခံစားမှုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာ (လွယ်ကူစွာထိခိုက်, စားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြပုံတူပွားခြင်း, 1987; ကယ်လီ et al, 2006); ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, (ကြည့်ရှုZuckerman, 1986) ။ ကြွက်များတွင်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်ကိုလည်း (နောက်ဆက်တွဲမူးယစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Piazza et al, 1989; ကာဣန et al, 2005; Meyer et al, 2010), အဲဒီနှစျခု phenotypes covary ကြောင်းအကြံပြု။ ဤအခြင်းနှင့် neurochemical အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး, (အလွဲသုံးစားမှုအသစ်အဆန်းများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်အခြေခံကြောင်း mesocorticolimbic circuitry အတွက်ထပ်တူဖြစ်ရှိထင်နေသည်Rebec et al။ , 1997a; Rebec et al။ , 1997b; Bardo နှင့် Dwoskin, 2004) ။ အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု (အထူးသဖြင့်အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု) (သူတို့ရဲ့အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအဘို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြမာ့က်စ et al, 1955; Stewart က, 1960; ကာဣန et al။ , 2006; လျူ et al, 2007; Olsen နှင့် Winder, 2010), နှင့်ကျွန်တော်မကြာသေးမီက (မတူညီအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများဖြန်ဖြေအတွက် dopaminergic နှင့် glutamatergic အချက်ပြ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသရုပ်ပြပါပြီOlsen နှင့် Winder, 2009; Olsen et al, 2010) ။ အာရုံကြော plasticity များအတွက်ကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထားအာရုံခံစနစ်များအားကြီးသော activation သို့မဟုတ်ဆင်းရဲချို့တဲ့အောက်ပါလည်းမရှိပေမယ့်ဆန္ဒရှိဖြစ်မဟုတ်ကြောင်း parameters တွေကိုအတွင်းအသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုမှ discrete ထိတွေ့အောက်ပါ plasticity (ကန့်သတ်Kaas, 1991; Rauschecker, 1999; Uhlrich et al, 2005; Smith က et al, 2009) ။ သို့သော်အသစ်အဆန်းများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအပါအဝင်ဆွေးနွေးတင်ပြသည်အခြားအကြောင်းအရာများ၏ရှုထောင့်တို့ပါဝင်သည်သည့်သန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင် (အတွင်းအိုးအိမ်နှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြော plasticity အပေါ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဥစ္စာဓနသည်ရှိ၏, ပိုပြီး In-depth ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ (Kolb နှင့် Whishaw, 1998; ဗန် Praag et al, 2000a; Nithianantharajah နှင့် Hannan, 2006)) ။ Hebb ၏ကျော်ကြားသောလေ့လာမှုသီအိုရီသည်သူရရှိသောရလဒ်များကြောင့်လွှမ်းမိုးထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင် (ကြွယ်ဝသော) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြွက်များသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ရှိနေသောအမှိုက်သရိုက်များထက်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။Hebb, 1947) ။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ဖို့တုန့်ပြန်ဦးနှောက်အလေးချိန်, angiogenesis, neurogenesis, gliogenesis နှင့် dendritic ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကို (EE) ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြBennett က et al, 1969; Greenough နှင့် Chang, 1989; Kolb နှင့် Whishaw, 1998; ဗန် Praag et al, 2000b) ။ microarray လေ့လာမှုများမှ ပို. မကြာသေးမီဒေတာ EE အိမ်ယာ (NMDA-မှီခို plasticity နှင့်အာရုံကြောနှင့်အတူပါဝင်ဗီဇကက်စကိတ်၏စကားရပ် induces ကြောင်းပြသကြRampon et al, 2000) ။ တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စု (သာ3နာရီ (မြောက်မြားစွာဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုမှဆိုလိုသည်မှာထိတွေ့မှု) အတွက် EE ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ neuritogenesis နှင့် plasticity နှင့်ဆက်စပ်လမ်းကြောင်းအတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်တိုးပွားလာအလားတူရလာဒ်များခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရRampon et al။ , 2000).
EE အားဖြင့်သွေးဆောင်ပလတ်စတစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ sensitivity ကိုလျှော့ချရန်ပေါ်လာသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေဆန့်ကျင်နေတဲ့ "အကာအကွယ် phenotype" (တစုံတခုကိုအပ်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်အထွေထွေလမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းဆုလာဘ်, လိုပဲလှေကားနှင့် Bardo, 2009; သီရဲလ် et al, 2009; Solinas et al, 2010; သီရဲလ် et al, 2011) ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးအခြေအနေများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, EE (ကမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့် locomotor activation ၏ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးအတွက်ညာဘက်ပြပြောင်းကုန်ပြီအဖြစ် attenuation morphine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor ာင်းထုတ်လုပ်Bardo et al, 1995; Bardo et al, 1997) ။ EE ကိုသက်ဝင်အရေးကြီးတဲ့နီကိုတင်းနှင့်လျှော့ချကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှုနှင့်အပြုအမူရှာ locomotor attenuated ရှိရာ (EE ကိုကင်း CPP ကတိုးလာပေမယ့်) တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူလမ်းကြောင်းသစ် (psychostimulant ကုသမှုအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်စိမ်းလန်းသော et al, 2003; စိမ်းလန်းသော et al, 2010) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ EE NAc အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပြုခဲ့သို့မဟုတ်အများအပြား mesocorticolimbic ဒေသများရှိ binding striatal DA ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ် mu opiate အဲဒီ receptor (စုံစမ်းစစ်ဆေးBardo et al။ , 1997), စီဂိုဗီယာနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦး Basal အတွက်တိုးနှင့် K ရှာတွေ့လုပ်ခဲ့တယ်ပေမယ့်+EE အောက်ပါ -stimulated NAc DA (စီဂိုဗီယာ et al။ , 2010) ။ အဆိုပါ PFC (သို့သော် NAc သို့မဟုတ် striatum မဟုတ်) ခုနှစ်, EE ကြွက် (dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ကိုလျှော့ချရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်Zhu et al, 2005) ။ prefrontal DA အချက်ပြ၌ဤရရှိလာတဲ့တိုး mesolimbic လှုပ်ရှားမှု, Impulse နှင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး (အကျိုးသက်ရောက်နိုင်Deutch, 1992; Olsen နှင့် Duvauchelle, 2001, 2006; Everitt et al။ , 2008; del Arco နှင့် Mora, 2009) ။ လတ်တလောအလုပ် (CREB ၏ attenuation လှုပ်ရှားမှုဖော်ထုတ်နှင့်ဆင်းရဲမွဲတေပြီးကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ NAc အောက်ပါ 30 ရက်ပေါင်း EE အတွက် BDNF လျှော့ချထားသည်စိမ်းလန်းသော et al။ , 2010), NAc BDNF အဆင့်ဆင့်အိုးအိမ်၏တစ်နှစ်အောက်ပါ EE နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အကြားအလားတူခဲ့ကြသည်ပေမယ့် (စီဂိုဗီယာ et al။ , 2010) ။ EE ကိုလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုသာသက်ရောက်သည်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏ induction zif268 မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏ကင်း-သွေးဆောင်စကားရပ် striatum အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့ (EE သူ့ဟာသူ striatal မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ခြီးမွှောမှရှာတွေ့ခဲ့သည်ပေမယ့်) အ NAc အတွက်ကင်းအသုံးပြုပုံလျှော့ချဖြစ်ပါတယ် (Solinas et al, 2009) ။ ဤ "အကာအကွယ်" အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲစွဲလမ်း၏လယ်ပြင်တွင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိပါ။ EE အားဖြင့်သွေးဆောင် plasticity ၏ဒီဂရီကအတော်ကြာအာရုံကြောရောဂါများ (ကနေပြန်လည်နာလန်ထူကာကွယ်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌လေ့လာခဲ့ခံရဖို့ဆက်လက်ကြောင်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်ဗန် Praag et al။ , 2000a; Spiers နှင့် Hannan, 2005; Nithianantharajah နှင့် Hannan, 2006; Laviola et al, 2008; Lonetti et al, 2010), နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ EE ၌ကျိန်းဝပ်သောအခါမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာတောင်မှကင်ဆာလွှတ်အတွက် hypothalamic-မှီခိုတိုးတွေ့ရှိခဲ့ (Cao et al, 2010) ။ လေ့ကျင့်ခန်းပတ်သတ်ပြီးထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းသန့်စင်အိမ်ယာ၏အလားအလာ Anti-စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုစဉ်းစားနေချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် EE ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကောက်ချက်လုပ်ရပါမည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလိုပဲ, EE (hippocampal neurogenesis တိုးမြှင့်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့ပြီးဗန် Praag et al။ , 2000b) နှင့်ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှု၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ (Laviola et al။ , 2008).
6 ။ ဆွေးနွေးချက်
တချို့လူတွေမှာတော့, (ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်လိင်ကဲ့သို့) ကသဘာဝဆုလာဘ်အချို့ (အပြုအမူသို့မဟုတ် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုချေါပါပွီတဲ့အခွအေနေထိတွေ့ဆက်ဆံမှု compulsive ဖို့ "ပုံမှန်" ကနေအကူးအပြောင်းလည်းမရှိHolden, 2001; ဂရန် et al။ , 2006a) ။ Non-မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်သုတေသနတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအသိပညာမူးယစ်ဆေးစွဲ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ၏တောအရပ်မှရရှိခဲ့ Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်ကုထုံးမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲကုသရန်အသုံးပြု pharmacotherapies Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကုသမှအောင်မြင်တဲ့ချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်စေခြင်းငှါထွန်းသစ်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, naltrexone, nalmefine, N-acetyl-cysteine ​​နှင့်အားလုံး (ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်တဏှာလျှော့ချရန်အစီရင်ခံထားပြီ modafanilကင်မ် et al, 2001; ဂရန် et al, 2006b; Leung နှင့် Cottler, 2009) ။ Opiate ရန်လည်း (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကုသမှုထဲမှာသေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုများအတွက်ဂတိတော်ကိုပြကြပါပြီပေးသနားခြင်းနှင့်ကင်, 2001), နှင့် topirimate (မူးရူးစားရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်လူနာမူးရူးဖြစ်စဉ်များနှင့်အလေးချိန်လျှော့ချအောင်မြင်မှုပြသခဲ့သည်McElroy et al, 2007) ။ Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဤကုသမှု၏အောင်မြင်မှုကိုနောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးနှင့် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအကြားဘုံအာရုံကြောအလွှာရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလည်း (Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးကူညီကြမည်Potenza, 2009; Winstanley et al, 2010) ။ Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အချို့အမျိုးအစားများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာအခြားသူများထက်ကြွက်များတွင်လုပ်ပါတယ်နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကို အသုံးပြု. Paradigm အဆိုပါ compulsive မှအကူးအပြောင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအစားအစာစားသုံးမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မူဘောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ မြင့်မားသောဆီဥ, မြင့်မားသောသကြား, ဒါမှမဟုတ်တိုးမြှင့်အတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်မြင့်မားသောအလေးချိန်အမြတ်, လူ့အဝလွန်ခြင်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းများကို (ထဲမှာ "ကော်ဖီဆိုင်စတိုင်" အစားအသောက်များတွင်ရလဒ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကို အသုံးပြု. ကြွက်မော်ဒယ်များRothwell နှင့်စတော့အိတ်, 1979, 1984; လင်း et al, 2000) ။ ဤရွေ့ကားကုသမှုအစားအစာအကျိုးသည်အနာဂတ်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် (Wojnicki et al, 2006) နှင့် mesolimbic dopamine စနစ်အာရုံကြော plasticity မြားတှငျပွောငျးလဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ (Hoebel et al, 2009) ။ စားနပ်ရိက္ခာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဒယ်များအစားအစာ-ဆက်စပ်တွေကိုနှင့်ဖိအားအစားအစာရှာဖို့ relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောနောက်ထပ်တွေ့ပြီ (အခန်း et al။ , 2007; Grimm et al, 2008; Nair et al။ , 2009b), တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းလည်း (လူ့ Dieter များအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြDrewnowski, 1997; Berthoud, 2004) ။ ထို့ကြောင့်မော်ဒယ်များဤအမျိုးအစားများကိုမြင့်မားတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအစားအစာအတွက်အကျိုးရှိသောပြောင်းလဲမှုအောက်ပါထိုကဲ့သို့သောအလွန်အကျွံစားအလေ့အထများမှအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအစားအစာစားသုံးမှုသို့မဟုတ် relapse အဖြစ်လူ့အခြေအနေများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသော neuroadaptations ဖြစ်ပေါ်စေမည်။
မကြာသေးမီတိုးတက်မှု၏နောက်ထပ်ဧရိယာဟာလောင်းကစားဝိုင်း၏ကြွက်မော်ဒယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု (ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဗန်တွင်း Bos et al, 2006; Rivalan et al, 2009; စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009; ဇေဘတို့ကို et al။ , 2009; Jentsch et al, 2010) ။ လေ့လာရေးကြွက်ကတော့အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန် (IGT) (performing နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီRivalan et al။ , 2009; ဇေဘတို့ကို et al။ , 2009) နှင့်တစ်ဦး slot ကစက်လုပ်ငန်းတာဝန် (Winstanley et al, 2011) ။ တဦးတည်းလေ့လာမှု IGT အပေါ် suboptimally ဖျော်ဖြေကြောင်းကြွက်များပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်အဆင့်မြင့်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ (ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရRivalan et al။ , 2009), လူ့လူနာအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းစရိုက်များအလားတူ (ပုံတူပွားခြင်း, 1987; Zuckerman, 1991; Cunningham-Williams က et al, 2005; Potenza, 2008) ။ ကြွက်မော်ဒယ်များအသုံးပြုခြင်း, လေ့လာမှုများကိုလည်း (ထို "လောင်းကစားလုပ်တဲ့မှ drive ကို" နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် pharmacotherapies ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးစေခြင်းငှါအရာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများကိုအာရုံစိုက်နေကြတယ်Winstanley, 2011; Winstanley et al။ , 2011).
တစ်ဦးစစ်ကူအဖြစ်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. Mechanistic လေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုအာရုံခံစစ်ကူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး modulate သောမော်လီကျူးယန္တရားများ၏ထပ်နေသည်ကိုတွေ့ကြပြီOlsen နှင့် Winder, 2009; Olsen et al။ , 2010) ။ ဤမြေကွက်၌သုတေသနင်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏နေချိန်မှာအဲဒီနှင့်အနာဂတ်စမ်းသပ်ချက်ဟာ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကုသမှုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားဘို့အလားအလာကုထုံးမဟာဗျူဟာသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
ဤနှင့်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များတွင်တိုးတက်မှုများကကျွန်ုပ်တို့အားမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်စဉ်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်လာစေရန်စတင်သည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုပုံစံပြုရန်ကြိုးစားစဉ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာမော်ဒယ်အများစုတွင်၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်အပြုအမူများ၌အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးဆက်များမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ဆုများအကြားတွင်ပိုမိုသေးငယ်သောအကျိုးကျေးဇူးများသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးမှုများပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်သည်ရှုံးနိမ့်ပြီးသည့်နောက်တွင်သူ၏နေအိမ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ အခြားအကန့်အသတ်တစ်ခုမှာဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများတွင်အစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၌အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုလာဘ်များမရရှိနိုင်သောတိရစ္ဆာန်များ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။Ahmed က, 2005) ။ ဒါကထူးခြားတဲ့အခြေအနေ (လူ့လူဦးရေအတွက်အန္တရာယ်-ကျရောက်နေတဲ့တစ်ဦးချင်းစီပုံစံအဆိုပြုပြီးပါပြီAhmed က, 2005), ဒါကြောင့်နေဆဲလေ့လာမှုများဤအမြိုးအစားများအတွက်အသိပေးချက်ကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း။
, အလွန်အကျွံ compulsive, ဒါမှမဟုတ်စား maladaptive စွမ်းဆောင်ရည်, လောင်းကစားနှင့်အခြား Non-မူးယစ်ဆေးအပြုအမူတွေ၏ဆက်လက်လေ့လာမှု Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးတက်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူ့လူဦးရေအတွက်သုတေသနနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောဤနည်းလမ်းများသုံးပြီး preclinical လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များ (မူးယစ်ဆေးနှင့် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကြိုးနိုင်ကြောင်း "crossover" pharmacotherapies မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်ဂရန် et al။ , 2006a; Potenza, 2009; Frascella et al။ , 2010).
ဖြစ်နေဆဲတစ်ခုမှာမေးခွန်းတစ်ခုကိုအာရုံခံ၏တူညီသောလူဦးရေမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်များက activated ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်တူရှိကွောငျးလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများအလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒေသများရှိနေစဉ် (Garavan et al, 2000; Karama et al, 2002; Childress et al, 2008), သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းအာရုံကြောလူဦးရေအတွက်ထပ်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲလွဲဒေတာရှိပါတယ်။ ကြွက်နှင့် Non-လူ့မျောက် ventral striatum ကနေလူပျိုယူနစ်အသံသွင်းသည့်ကြားကထပ်နေသည်ကို၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိ၏ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အာရုံကြောလူဦးရေ, ကင်းသို့မဟုတ်အီသနော vs. သဘာဝကဆုလာဘ် (အစားအစာ, ရေ, sucrose) ၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းစေ့စပ်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအဆုလာဘ် (Bowman et al, 1996; Carelli et al, 2000; Carelli, 2002; Robinson နဲ့ Carelli, 2008) ။ ကွဲပြားခြားနားသောအတန်း၏မူးယစ်ဆေးဝါး mesocorticolimbic သည့်စနစ်အတွင်းကွဲပြားအာရုံကြော ensembles ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ ကြွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ၏ medial PFC နှင့် NAc ကနေလူပျိုယူနစ်အသံသွင်းအာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေ differential (နှစ်ဦးစလုံး anticipatory နဲ့ post-ပြုတ်ရည်ကာလအတွင်းမှာစေ့စပ်ခဲ့ထင်ရှားChang et al, 1998) ။ ဆန့်ကျင်ဘို့သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားခွဲခြားမှု, သို့သော်, ဒါအကြွင်းမဲ့အာဏာမည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံဖို့အချိန်ထိတွေ့မှုအပြီးတွင်အဆိုပါ NAc တွင်ဤနှစ်ခုဆုလာဘ်များက activated အာရုံခံ၏သိသာထင်ရှားသောတိုက်ဆိုင်မှု, anterior cingulate cortex နှင့် basolateral amygdala (ရှိခဲ့Frohmader et al။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်အလွဲသုံးစားမှုအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်အာရုံကြောလူဦးရေစုဆောင်းမှုတချို့သဘာဝကဆုလာဘ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်တခြားသူတွေရဲ့ကြောင်းနှင့်အတူထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ပိုမိုပြည့်စုံသောဘက်ထရီကို အသုံးပြု. အနာဂတ်လေ့လာမှုများဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ပေါ်ပေါက်သည်ဟုနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသဘာဝအဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏လေ့လာမှုကျွန်တော်တို့ကိုမူးယစ်ဆေးများနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစွဲနားလည်သောအရာကိုဒီဂရီကိုကူညီနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထားအခြို့သော Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ထိတွေ့မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကနေ "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်" ဖြစ်စေဝေငှနိုင်သောအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သကြားနဲ့ saccharin (ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချနိုင်ပါတယ်ကာရိုး et al။ , 1989; Lenoir နှင့် Ahmed က, 2008), နှင့်အဆိုပါသဘာစစ်ကူ (ကြွက်၏ကြီးမားသောအများစုအတွက်ရွေးချယ်မှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်း outcompete မှသရုပ်ပြခဲ့ကြLenoir et al။ , 2007; Cantin et al။ , 2010) ။ လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးနောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်ခုနှစ်, Cantin et al။ သာ ~ ကြွက်၏ 9% saccharin ကျော်ကင်းကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတိရိစ္ဆာန်များ၏ဤအသေးအချိုးအစား "စွဲ" ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သောလူဦးရေကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ (မူးယစ်ဆေးမှီခိုဘို့ DSM-IV စံပုံစံပြုပြင်ထားသောစံနှုန်းများကိုအသုံးပြုပြီး "စွဲ" ကြွက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြDeroche-Gamonet et al။ , 2004; ဘီးလင်း et al, 2009; Kasanetz et al, 2010) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကလူသားတွေအတွက်ကင်းမှီခို၏နှုန်းထားများအဘို့ခန့်မှန်းချက်ယခင်က ~ 17-20% (ထံမှမူးယစ်ဆေးအကွာအဝေးထိတွေ့နေချိန်မှာတိရိစ္ဆာန်များ Self-စီမံခန့်ခွဲကိုကင်းများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ~ 5-15%, သုံးခုစလုံးစံနှင့်ကိုက်ညီသောတွေ့ပြီအန်သိုနီ et al, 1994; O 'Brien နှင့်အန်တိုနီ, 2005) ။ ထို့ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်အများစုတွင်သကြားနှင့် saccharin သည်ကိုကင်းထက်ပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည်။ အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်မေးခွန်းတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ပိုကောင်းသောဆေးများကိုတွေ့ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များ၏လူနည်းစုသည်စွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သော“ အားနည်းချက်ရှိသော” လူ ဦး ရေကိုကိုယ်စားပြုခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏တစ် ဦး ချင်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကို ဦး စား ပေး၍ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအားနည်းချက်များကိုသိမြင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုသဘာဝကဆုလာဘ်များလိုက်စားမူးယစ်ဆေးစွဲတားဆီးသို့မဟုတ်ပြုမူဆက်ဆံကူညီပေးနိုင်ပါသည်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်တဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး (နဲ့အတူ preclinical လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်ကုသမှုအတိုင်းအတာနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီBardo et al, 2001; Deehan et al, 2007; Solinas et al, 2008; Solinas et al။ , 2010) ။ လူ့အကျဉ်းသားများ၏လေ့လာရေး ( "ကုထုံးအသိုင်းအဝိုင်း" ၏အသုံးပြုမှုကိုတစျဆငျ့ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာသန့်စင်တကယ်တော့အနာဂတ်ရာဇဝတ်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးထိရောက်တဲ့ကုသမှု option ကိုကြောင်းအကြံပြုInciardi et al, 2001; Butzin et al, 2005) ။ ဤရလဒ်သည်အလားအလာများမှာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်အလားအလာနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ် neuroadaptations တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ဆင်တူ, လေ့လာမှုများလေ့ကျင့်ခန်း (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse လျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ကြပြီCosgrove et al။ , 2002; Zlebnik et al။ , 2010) ။ လေ့ကျင့်ခန်း abstinent ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ relapse လျော့နည်းစေတဲ့အတိုင်းဒီ preclinical တွေ့ရှိချက်လူ့လူဦးရေမှဘာသာပြန်ဆိုအချို့သက်သေအထောက်အထားများ (လည်းရှိပါသည်ဒံယလေက et al, 2006; Prochaska et al, 2008), နှင့်တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်လေ့ကျင့်ကြောင်းသင်တန်းသားများအတွက်အောင်မြင်မှုမြင်ကြနှင့်ပရိုဂရမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်မာရသွန်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည် (ဘတ္, 2005).
7 ။ နိဂုံးချုပ်မှတ်ချက်
တဏှာ, အမူအကျင့်အပေါ်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှု, သည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် relapse မြင့်မားမှုနှုန်း (အပါအဝင် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအများအပြားမျဉ်းပြိုင်ရှိပါတယ်,Marks, 1990; Lejoyeux et al ။ , 2000; မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားသိပ္ပံ (NIDA) et al ။ , 2002; Potenza, 2006) ။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင်, သဘာဝဆုလာဘ်စွဲ-related circuitry အတွက် plasticity inducing နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုမှားယှငျး ခဲ့. လည်းမရှိ။ သဘာဝကဆုလာဘ်ထက်ပိုပြီးသိသာဆိုသော်ငြားအလွဲသုံးစားမှု 1) မူးယစ်ဆေး (ဆင်တူဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်အတွင်းလုပ်ရပ်များကွိုးစားအားထုအဖြစ်ဤသည်, တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာအဖြစ်မလာသင့်တယ်ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002), နှင့် 2) (ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုအမြင့်ဆုံးရသောအခြေအနေများတစ်ဦးရှင်သန်မှုရှုထောငျ့မှအကျိုးရှိခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏သဘာဝ function ကိုဖြစ်သကဲ့သို့အမှုအရာများအကြားအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူAlcock, 2005) ။ အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ဒီ plasticity မူးယစ်ဆေးစွဲနဲ့တူအောင်အပြုအမူတွေအတွက် compulsive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ကျယ်ပြန့်ဒေတာများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အစာစားခြင်း, စျေးဝယ်, လောင်းကစား, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုကစားများနှင့်အသုံးစရိတ်အချိန်ကြီးကျယ်သောအကျိုးဆက်များ (ကြားမှဆက်လက်ဖြစ်ကြောင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သောအပြုအမူဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလူငယ်တို့, 1998; Tejeiro Salguero နှင့် Moran, 2002; Davis ကနှင့် Carter က, 2009; Garcia ကနှင့် Thibaut, 2010; Lejoyeux နှင့် Weinstein, 2010) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသကဲ့သို့, အလယ်အလတ်ကနေ compulsive အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအကူးအပြောင်းကာလ (ရှိဂရန် et al။ , 2006a), က "သာမန်" နှင့်ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားအကြားလိုင်းဆွဲရန်ခက်ခဲသည်ပေမယ့်။ ဒီဂုဏ်ထူးအောင်တစ်ခုမှာအလားအလာချဉ်းကပ်နည်းပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဘို့ DSM စံသုံးပြီးလူနာစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပြီး, အစီရင်ခံစာများ (လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းလူနာမှလျှောက်ထားသည့်အခါဤအ DSM စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ကြပြီGoodman, 1992), လောင်းကစားဝိုင်း (Potenza, 2006), အင်တာနက်အသုံးပြုမှု (Griffiths က, 1998), နှင့်အစာစားခြင်း (Ifland et al, 2009) ။ အဆိုပါ DSM-5 "စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါ" အတွင်းအလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်၏အမျိုးအစားထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို (နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားAmerican Psychiatric Association, 2010), ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ရောင်စဉ်ရောဂါအဖြစ်စွဲစဉ်းစားရန်ကောင်းစွာစွဲသုတေသီများနှင့် Clinician အစေခံလိမ့်မယ်။ သည်အခြားနယ်ပယ်များတွင်, nomenclature ဤအမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်သန္ဓေသားအရက်အဖြစ်မမှန်ပြင်းထန်မှုများမြောက်မြားစွာအဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောအသိပညာပေးဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ စွဲလမ်း (မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ် Non-မူးယစ်) ၏အမှု၌ပင် "အလယ်အလတ်" ၏တံခါးခုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရောဂါလက္ခဏာများ၏မှတ်ပုံတင်မှာ-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီစေခြင်းငှါနှင့်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကြားဝင်ဘို့ခွင့်ပြုပါ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကသဘာဝဆုလာဘ်များလိုက်စားအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံး Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်ဆံဖို့အတွက် compulsive ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ DA026994 ပေးခဲ့ပါသည်။ ငါကယ်လီ Conrad, Ph.D ဘွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် နှင့် Tiffany မည်, Ph.D ဘွဲ့ကို ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ယခင်ဗားရှင်းအပေါ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်သည်။
ထုတ်ဝေသူ၏ရှင်းလင်းချက် - ဒါကထုတ်ဝေမှုအတွက်လက်ခံလိုက်ပါသည်တစ်ခုတည်းဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ PDF ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကျနော်တို့ကလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ဤအစောပိုင်းဗားရှင်းပေးနေကြသည်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး citable form မှာထုတ်ဝေမီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် copyediting, လုပ်ခြင်း, စာစီ, နှင့်ရရှိလာတဲ့သက်သေ၏သုံးသပ်ချက်ကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအမှားအယွင်းများအကြောင်းအရာကိုထိခိုက်နိုင်သည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိစေခြင်းငှါ, ထိုဂျာနယ်လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဥပဒေရေးရာအကြောင်းသတိပြုစရာများစပ်ဆိုင်သောအကြောင်းသတိပြုပါ။
(APA) APA DSM-5 အဆိုပြုထားသောပြင်ဆင်မှုများတွင်အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါအသစ်အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ၂၀၁၀ [သတင်းထုတ်ပြန်ချက်] မှရယူရန် http://wwwdsm5org/newsroom/pages/pressreleasesaspx.
Aghajanian GK ။ morphine မှ locus coeruleus အာရုံခံ၏သည်းခံစိတ်နှင့် clonidine အားဖြင့်ရုပ်သိမ်းရေးတုံ့ပြန်မှု၏ဖိနှိပ်မှု။ သဘာဝ။ 1978; 276: 186-188 ။ [PubMed]
အာမက် SH မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုလာဘ်များရရှိနိုင်မှုအကြားမညီမျှမှု - စွဲလမ်းမှုအတွက်အဓိကအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ Eur J ကို Pharmacol ။ 2005; 526: 9-20 ။ [PubMed]
Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 282: 298-300 ။ [PubMed]
Aiken CB ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုတွင် Pramipexole: စာပေကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 68: 1230-1236 ။ [PubMed]
Narang N ကို, Wamsley JK, ME Alburges ။ ကိုကင်းများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် dopaminergic အဲဒီ receptor စနစ် ALTER ။ synapses ။ 1993; 14: 314-323 ။ [PubMed]
Alcock ဂျေတိရိစ္ဆာန်အပြုအမူ - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု။ Sinauer Associates မှ; ဆန်းဒါးလန်း, Mass: 2005 ။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုအသင်းမှတစ် ဦး က DSM-5 တွင်အဆိုပြုထားသောပြင်ဆင်မှုများတွင်အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါအသစ်အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ၂၀၁၀ [သတင်းထုတ်ပြန်ချက်] မှရယူရန် http://wwwdsm5org/newsroom/pages/pressreleasesaspx.
sensitization အတွက် Antelman SM, Eichler AJ, Black က CA, Kocan stress စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် amphetamine ၏လဲလှယ်နိုင်ခြင်း။ သိပ္ပံ 1980; 207: 329-331 ။ [PubMed]
Anthony JC၊ Warner LA၊ Kessler RC ။ ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သောအရာများနှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းများအပေါ်မှီခိုမှုနှိုင်းယှဉ်ပြသခြင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒ - အမျိုးသားရောဂါဖြစ်ပွားမှုစစ်တမ်းမှတွေ့ရှိချက်များ။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 1994; 2: 244-268 ။
Asahina S, Asano K, Horikawa H, Hisamitsu T, Sato M. ကြွက်၏ hypothalamus တွင် beta-endorphin အဆင့်တိုးခြင်း။ ဂျပန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အားကစားဆေးပညာဂျာနယ်။ 2003; 5: 159-166 ။
Aston-Jones, G, Harris က GC ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုတိုးမြှင့်ရန် ဦး နှောက်အလွှာများ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 167-179 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Hoebel BG ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-sensitized ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ်-သွေးဆောင် hyperactivity (လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive) နှင့်သကြား hyperphagia ပြသပါ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003a; 74: 635-639 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Hoebel BG ။ သကြားမှီခိုမြှင့်တင်တစ်ဦးကအစားအစာစိတ်ကြွဆေး၏အနိမ့်ထိုးဖို့အမူအကျင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ neuroscience ။ 2003b; 122: 17-20 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Long က ka, Hoebel BG ။ တစ်သကြားဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအထောက်အထား: သကြား-မှီခိုကြွက်နေကြပြီးသကြားအဘို့တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ပြသပါ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 84: 359-362 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008; 32: 20-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Balleine BW, Dickinson အေပန်းတိုင်-ညွှန်ကြားဆာပအရေးယူဆောင်ရွက်မှု: အရေးပေါ်နှင့်မက်လုံးပေးသင်ယူမှုနှင့်၎င်းတို့၏ cortical အလွှာဟာ။ Neuropharmacology ။ 1998; 37: 407-419 ။ [PubMed]
Bardo MT, ဘိုးလင်း SL, Rowlett JK, Manderscheid P ကို, Buxton ST, Dwoskin LP ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်စသည်တို့ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် locomotor ာင်း attenuates, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1995; 51: 397-405 ။ [PubMed]
Bardo MT, Dwoskin LP ။ အသစ်အဆန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေသည့်တွန်းအားပေးစနစ်များအကြားဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု။ Nebr Symp Motiv ။ 2004; 50: 127-158 ။ [PubMed]
Bardo MT, Klebaur je, Valone JM, Deaton C. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်အမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 155: 278-284 ။ [PubMed]
မော်ဖင်းအကိုက် - အပြုအမူများ၊ opioid receptors နှင့် dopamine ပေါင်းစပ်မှုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောမွေးမြူရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ Bardo MT, Robinet PM, Hammer RF ။ , Jr. Neuropharmacology ။ 1997; 36: 251-259 ။ [PubMed]
ကမ်းခြေအက်ဖ်အေ, ဂျော်ဒန်အယ်လ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင်များ၏အထီးတည်းမှာပြေးလမ်းတစ်လျှောက်တွင်။ J ကို Comp Physiol Psychol ။ 1956; 49: 105-110 ။ [PubMed]
Bechara အေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံး: တစ် neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1458-1463 ။ [PubMed]
Belin D၊ Balado E၊ Piazza PV၊ Deroche-Gamonet V. စားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပုံစံများသည်ကြွက်များတွင်ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 863-868 ။ [PubMed]
Belke TW, Dunlop အယ်လ် naltrexone မြင့်မားသောဆေးများသည်ကြွက်များတွင်ပြေးဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းအတွက်ပြေးခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - opiate အယူအဆကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ Psychol Rec ။ 1998; 48: 675-684 ။
Belke TW, Heyman GM ။ ကြွက်များတွင်ဘီးများလည်ပတ်နေခြင်း၏အားဖြည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုကိုက်ညီသည့်ဥပဒေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Animav Behav Learn ။ 1994; 22: 267-274 ။
အဆိုပါ striatum အတွက် Bello NT, လူးကပ်စ LR, Hajnal အေထပ်ခါတစ်လဲလဲ sucrose access ကိုလွှမ်းမိုးမှု dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ။ Neuroreport ။ 2002; 13: 1575-1578 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bennett EL, Rosenzweig MR, Diamond MC ။ ကြွက် ဦး နှောက် - စိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောအလေးများအပေါ်ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်စင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံ 1969; 163: 825-826 ။ [PubMed]
Berthoud HR ။ စိတ်နှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတို့ကိုအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စွမ်းအင်မျှတမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ Physiol Behav ။ 2004; 81: 781-793 ။ [PubMed]
Besheer J, Jensen HC, Bevins RA ။ ကြွက်နှင့်အတူပြင်ဆင်မှုတစ်ဝတ္ထု - အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ဝတ္ထု - အရာဝတ္ထုရာအရပျအေးစက်အတွက် Dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 1999; 103: 35-44 ။ [PubMed]
Bevins RA, Bardo MT ။ MK-801 မှရန်လိုမုန်းတီးမှု - ဝတ္ထု ၀ တ္ထုများအား ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်နေရာပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 1999; 99: 53-60 ။ [PubMed]
ဘီဒင်အေ၊ ဘီရှီးယားဂျေအသစ်တီထွင်မှုသည် anhedonia ၏အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2005; 29: 707-714 ။ [PubMed]
Bjornebekk A, Mathe AA, Brene S. Running သည်တိရိစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံတွင် NPY၊ opiates နှင့်ဆဲလ်များပြန့်ပွားမှုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 256-264 ။ [PubMed]
အနက်ရောင် DW ။ မဖြစ်မနေဝယ်ဝယ်ရောဂါ: သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ CNN Spectrums ။ 2007; 12: 124-132 ။ [PubMed]
Borgland SL, Malenka RC, Bonci အေထူးခြားသောနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏နာတာရှည်ကင်း-သွေးဆောင်အလားအလာ: တစ်ဦးချင်းစီကြွက်များတွင် electrophysiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 7482-7490 ။ [PubMed]
Bowman EM, Aigner TG, Richmond BJ ။ ဖျော်ရည်နှင့်ကိုကင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောမျောက် ventral striatum ရှိအာရုံကြောအချက်ပြမှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1996; 75: 1061-1073 ။ [PubMed]
Bradley KC၊ Boulware MB၊ Jiang H၊ Doerge RW, Meisel RL, Mermelstein PG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပြီးတွင်နျူကလိယအတွင်းရှိဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုသည် accumbens နှင့် striatum ဖြစ်သည်။ မျိုးဗီဇ ဦး နှောက် Behav ။ 2005; 4: 31-44 ။ [PubMed]
Breiter HC, အာရုန်ငါ Kahneman: D, Dale တစ်ဦးကငွေကြေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမျှော်မှန်းခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ Shizgal P. Functional ပုံရိပ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2001; 30: 619-639 ။ [PubMed]
Bruijnzeel AW ။ kappa-Opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဆုလာဘ် function ကို။ ဦး နှောက် Res ဗျာ 2009; 62: 127-146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Butler SL ချွေးနှင့်အရည်ကြည်ဖုအတွက်သောက်စရာနှင့်ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ခြင်း။ The New York Times; နယူးယောက်: 2005 ။
Butzin, CA, မာတင်အက်စ်အက်စ်, Inciardi ဂျေအေ။ ထောင်မှအသိုင်းအဝိုင်းသို့အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစဉ်အတွင်းကုသမှု။ J အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံမှု။ 2005; 28: 351-358 ။ [PubMed]
Caggiula AR, Hoebel BG ။ အနောက်ဘက် hypothalamus အတွက် "Copulation- ဆုလာဘ် site ကို" ။ သိပ္ပံ 1966; 153: 1284-1285 ။ [PubMed]
Cain ME၊ Green TA၊ Bardo MT ။ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းမှုသည်အမြင်အာရုံအသစ်အတွက်တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေသည်။ အပြုအမူဖြစ်စဉ်များ။ 2006; 73: 360-366 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cain ME, Saucier DA, Bardo MT ။ အသစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း။ စမ်းသပ် & လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 2005; 13: 367-375 ။ [PubMed]
Cantin L ကို, Lenoir M က, Augier အီး, Vanhille N ကို, Dubreucq S, Serre က F, et al ။ ကိုကင်းသည်ကြွက်များ၏တန်ဖိုးမြှင့်အဆင့်တွင်နိမ့်သည် - စွဲလမ်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည့်အထောက်အထား။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010; 5: e11592 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cao L, Liu X, Lin EJ, Wang C, Choi EY, Riban V, et al ။ ဦး နှောက် -adipocyte BDNF / leptin ဝင်ရိုး၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသည်ကင်ဆာရောဂါနှင့်တားစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆဲလ်။ 2010; 142: 52-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Carelli RM ။ ကိုကင်းသည်သဘာဝအားဖြည့်အားဖြည့်ခြင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အပြုအမူများအတွင်းဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကိုနျူကလိယကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Physiol Behav ။ 2002; 76: 379-387 ။ [PubMed]
Carelli RM, Ijames စင်ကာပူဒေါ်လာ, Crumling AJ ။ အထောက်အထားများအနျူကလိယအတွက်သီးခြားအာရုံကြောဆားကစ် "သဘာဝ" (ရေနှင့်အစားအစာ) ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်အန်ကုက်လုပ်ကိုကင်း accumbens သော။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 4255-4266 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr. သောမတ်စ် MJ ။ ဆုလာဘ်နှင့်မနှစ်သက်၏ဇီဝအလွှာ: တစ်နျူကလိယလှုပ်ရှားမှုအယူအဆ accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 122-132 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကာရိုး ME, Lac ST, Nygaard SL ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်သည့် nondrug အားဖြည့်ဆေးသည်ကိုကင်းမှအားဖြည့်သည့်အပြုအမူများ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ psychopharmacology (Berl) 1989; 97: 23-29 ။ [PubMed]
Cassens, G, သရုပ်ဆောင်ကို C, Kling M, Schildkraut JJ ။ အမ်ဖီတမင်းဆေးထုတ်ယူမှု - intracranial အားဖြည့်ခြင်း၏တံခါးခုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 1981; 73: 318-322 ။ [PubMed]
Chang JY၊ Janak PH၊ Woodward DJ ။ ကြွက်များတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားနေသောကြွက်များအတွင်းကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်စဉ် mesocorticolimbic အာရုံခံတုန့်ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ရန်။ J ကို Neurosci ။ 1998; 18: 3098-3115 ။ [PubMed]
Chen BT, Bowers MS, Martin M, Hopf FW, Guillory AM, Carelli RM, et al ။ ကိုကင်းသည်သဘာဝစီမံချက်မဟုတ်ဘဲမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုနှင့် passive cocine ပြုတ်ရည်များသည် VTA တွင်မြဲမြံသော LTP ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Neuron ။ 2008a; 59: 288-297 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen BT၊ Hopf FW, Bonci A. Synaptic ပလတ်စတစ်သည် mesolimbic စနစ်တွင် - ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2010; 1187: 129-139 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen HI, Kuo YM, Liao CH, Jen CJ, Huang AM, Cherng CG, et al ။ ရေရှည် compulsive လေ့ကျင့်ခန်းသည် 3,4-methylenedioxymethamphetamine ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2008b; 187: 185-189 ။ [PubMed]
Childress AR, Ehrman RN, Wang Z, Li Y, Sciortino N, Hakun J, et al ။ စိတ်အားထက်သန်မှု၏နိဂုံး -“ မမြင်ရသော” မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားဖြင့် limbic activation PLoS တစ်ခုမှာ။ 2008; 3: e1506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chiodo LA က, Antelman သည် SM, Caggiula AR, Lineberry CG ။ အဆိုပါ substantia nigra အတွက် DA ဆဲလ်နှစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးအစားများအဘို့သက်သေအထောက်အထား: အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု dopamine (DA) တွင် neuron များ၏ဥတုနှုန်းကိုပြောင်းလဲပစ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1980; 189: 544-549 ။ [PubMed]
ခရစ် MJ, Chesher GB ကို။ ဇီဝကမ္မအားဖြင့်ထုတ်ပေးသော endogenous opiates အပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှု။ ဘဝသိပ္ပံ 1982; 30: 1173-1177 ။ [PubMed]
Clark PJ, Kohman RA, Miller DS, Bhattacharya TK, Haferkamp EH, Rhodes JS ။ C57BL / 6J ကြွက်များတွင်ပြေးသောဆန္ဒအလျောက်ဘီးများတိုးပွားလာနေစဉ်အတွင်းအရွယ်ရောက် hippocampal neurogenesis နှင့် c-Fos သော induction ။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2010; 213: 246-252 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပုံတူပွားခြင်း CR ။ အရက်ထဲမှာ Neurogenetic သပ္ပါယ်ယန္တရားများ။ သိပ္ပံ။ 1987; 236: 410-416 ။ [PubMed]
Colantuoni C, Rada P, McCarthy J, Patten C, Avena NM, Chadeayne A, et al ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှုသည် endogenous opioid မှီခိုမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟူသောအထောက်အထား။ Obes Res ။ 2002; 10: 478-488 ။ [PubMed]
et al Colantuoni C, Schwenker J, McCarthy J, Rada P, Ladenheim B, Cadet JL ။ အလွန်အကျွံသကြားဓာတ်စားသုံးမှုသည် ဦး နှောက်မှ dopamine နှင့် mu-opioid receptors များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နေပြည်တော်။ 2001; 12: 3549-3552 ။ [PubMed]
Conrad KL, Ford ကား K ကို Marinelli M က, ME Wolf ။ Dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးသည် dynamically ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ပြောင်းပေးပါ။ neuroscience ။ 2010; 169: 182-194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Contet ကို C, Filliol: D, Matifas တစ် ဦး, Kieffer BL ။ မော်ဖင်းအကိုက် - analgesic သည်းခံစိတ်၊ locomotor sensitization နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုတို့သည် mu opioid receptor၊ cdk5 နှင့် adenylate cyclase လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Neuropharmacology ။ 2008; 54: 475-486 ။ [PubMed]
Corsica ဂျယ်အေ, Pelchat ML ။ အစားအစာစွဲ - မှန်လားမှားလား? Curr Opin Gastroenterol ။ 2010; 26: 165-169 ။ [PubMed]
Cosgrove KP, Hunter RG၊ ကာရိုး ME ။ ဘီးပြေးခြင်းကကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းအားဖြည့်ကိုကာကိုလာအားလိင်ကွဲပြားမှုဖြစ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2002; 73: 663-671 ။ [PubMed]
လဲမှို့ P, Sabino V ကို, Steardo L ကို, Zorrilla EP ။ Opioid-dependent anticipatory ဆိုးဝါးသည့်ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်အလွန်အမင်းနှစ်သက်သည့်အစာကိုလက်လှမ်းမီရန်အကန့်အသတ်ရှိသောကြွက်များတွင်အရက်မူးခြင်းကဲ့သို့သောအစာစားခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 524-535 ။ [PubMed]
Covington HE, 3rd, Miczek KA ။ ထပ်ခါတလဲလဲလူမှု - ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, ကိုကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားမှုနှင့်သွေးကြောသွင်းကင်းကင်းအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ“ စိတ်ရှုပ်ခြင်း” Psychopharmacology (Berl) 2001 အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ၁၅၈: ၃၈၈-၃၉၈ ။ [PubMed]
Covington HE, 3rd, Miczek KA ။ ဖြစ်စဉ်များလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ပြင်းထန်သောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး, ဒါပေမယ့်ရန်လိုအပြုအမူပြီးနောက်မဟုတ်: corticosterone activation မှ dissociation ။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 183: 331-340 ။ [PubMed]
Crawford LL, Holloway KS, Domjan M. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်ခြင်း၏သဘောသဘာဝ။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1993; 60: 55-66 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Crombag HS, Gorny, G လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အဆိုပါ medial နှင့် Orbital prefrontal cortex အတွက် dendritic ကျောရိုးအပေါ်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ။ Cereb Cortex ။ 2005; 15: 341-348 ။ [PubMed]
Cunningham-Williams RM, Grucza RA, Cottler LB, Womack SB, Books SJ, Przybeck TR, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း: စိန့်လူးဝစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ (SLPHL) လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2005; 39: 377-390 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆေးလိပ်သောက်ချင်သောဆန္ဒနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်လေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ စွဲ။ 2006; 101: 1187-1192 ။ [PubMed]
Davis ကနေ C, Carter က JC ။ တစ်ခုစွဲရောဂါအဖြစ် compulsive ကျော်။ သီအိုရီများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 53: 1-8 ။ [PubMed]
et al Davis JF, Tracy AL, Schurdak JD, Tschop MH, Lipton JW, Clegg DJ ။ အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်ခြင်းသည်ကြွက်များတွင် psychostimulant ဆုလာဘ်နှင့် mesolimbic dopamine လည်ပတ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Behav Neurosci ။ 2008; 122: 1257-1263 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Deadwyler လုပ် SA အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး၏ Electrophysiological ဆက်စပ်မှု: သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2010; 1187: 140-147 ။ [PubMed]
Deehan GA, Jr. ကာainန ME, Kiefer SW ။ differential မွေးမြူရေးအခြေအနေများ outbred ကြွက်များတွင်အီသနောအဘို့တုံ့ပြန် operant ပြောင်းလဲ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007; 31: 1692-1698 ။ [PubMed]
Del Arco A၊ Mora F. Neurotransmitters နှင့် prefrontal cortex-limbic system interaction ကပလပ်စတစ်နှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်သက်ရောက်မှု။ J ကိုအာရုံကြော Transm ။ 2009; 116: 941-952 ။ [PubMed]
Deroche-Gamonet V, Belin: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲကဲ့သို့အပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ 2004; 305: 1014-1017 ။ မှတ်ချက် [PubMed]
Deutch AY ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အားဖြင့် subcortical dopamine စနစ်များကို၏စည်းမျဉ်း: ဗဟို dopamine စနစ်များ၏ interaction ကနှင့် schizophrenia ၏ pathogenesis ။ J ကိုအာရုံကြော Transm ပေးသွင်း။ 1992; 36: 61-89 ။ [PubMed]
Dommett အီး, Coizet V ကို, Blaha CD ကို, Martindale J ကို, Lefebvre V ကို, ဝေါ်လ်တန် N, et al ။ အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတိုတောင်းသော latency မှာ dopaminergic အာရုံခံ activate ။ သိပ္ပံ 2005; 307: 1476-1479 ။ [PubMed]
Drewnowski A. မြည်းစမ်း ဦး စားပေးများနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု။ Annu ဗြာ Nutr ။ 1997; 17: 237-253 ။ [PubMed]
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကျဆေးဝါးကုသမှုမှ Duman RS, Malberg J, Thome J. Neural plasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 46: 1181-1191 ။ [PubMed]
Ehringer MA, Hoft NR, Zunhammer M. ကြွက်များတွင်အဘယိုယိုယွင်းမှုနှင့်လည်ပတ်နေသောဘီးကိုအသုံးပြုခြင်း။ အရက်။ 2009; 43: 443-452 ။ [PubMed]
Epping-ဂျော်ဒန်လွှတ်တော်အမတ်, Watkins အက်စ်အက်စ်, Koob gf, နီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် function ကိုအတွက် Markou အေပြဇာတ်လျှောက်လျော့နည်း။ သဘာဝ။ 1998; 393: 76-79 ။ [PubMed]
Ernst ကို C, Olson AK, Pinel JP, Lam RW, Christie BR ။ လေ့ကျင့်ခန်း၏စိတ်ကျဆေးသက်ရောက်မှုများ: အရွယ်ရောက်ပြီးသူ - neurogenesis ယူဆချက်အတွက်သက်သေအထောက်အထား? J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurosci ။ 2006; 31: 84-92 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ettenberg တစ် ဦး က, စခန်း CH ။ Haloperidol သည်ကြွက်များတွင်အားဖြည့်သုတ်သင်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အစားအစာအတွက် dopamine ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1986; 25: 813-821 ။ [PubMed]
Evans AH, Pavese N, Lawrence အေဒီ၊ Tai YF, Appel S, Doder M, et al ။ ventral striatal dopamine ကူးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ Ann Neurol 2006; 59: 852-858 ။ [PubMed]
Everitt BJ, Belin: D, Economidou: D, Pelloux Y, Dalley JW, Robbins TW ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်အလေ့အထနှင့်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အားနည်းချက်ကိုအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3125-3135 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Everitt BJ, Dickinson တစ်ဦးက, Robbins TW ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2001; 36: 129-138 ။ [PubMed]
Everitt BJ, ဖွာ P ကို, Kostarczyk အီးတေလာက S, အထီးကြွက် (Rattus norvegicus) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပအပြုအမူများ Stacey P. လေ့လာရေး: တစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲအကျဉ်းအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဗြဲထိန်းချုပ်ရေး။ J ကို comp Psychol ။ 1987; 101: 395-406 ။ [PubMed]
Fiorino DF, Kolb BS ။ လိင်မှုအတွေ့အကြုံသည်ကြွက်များ၏ prefrontal cortex၊ parietal cortex နှင့်နျူကလိယအားအာရုံခံဆဲလ်များ၌ရှည်လျားသော morphological အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း; New Orleans, LA: 2003. 2003 Abstract Viewer နှင့် Itinerary Planner Washington, DC ။
Fiorino DF, Phillips က AG က။ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မြှင့်တင်ရန် dopamine efflux ၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 456-463 ။ [PubMed]
လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက် dopamine ဆားကစ်၏ Foley TE, Fleshner M. Neuroplasticity: ဗဟိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Neuromolecular Med ။ 2008; 10: 67-80 ။ [PubMed]
Frascella J ကို, Potenza MN, Brown က ll, Childress AR ။ shared ဦးနှောက်အားနည်းချက်များ nonsubstance စှဲများအတွက်လမ်းဖွင့်: သစ်တစ်ခုပူးတွဲမှာစွဲထွင်းထု? အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2010; 1187: 294-315 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လွတ်မြောက် CR, Yamamoto BK ။ ဒေသတွင်း ဦး နှောက် dopamine ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု - ရွေ့လျားနေသောတိရိစ္ဆာန်များ၏အမြန်နှုန်း၊ ဦး တည်ချက်နှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားတို့အတွက်အမှတ်အသားတစ်ခု။ သိပ္ပံ 1985; 229: 62-65 ။ [PubMed]
Frohmader KS, Wiskerke J, Wise RA, Lehman MN, Coolen LM ။ Methamphetamine သည်ယောက်ျားကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူအားထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြော၏လူ ဦး ရေအပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2010; 166: 771-784 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Garavan H ကို, Pankiewicz J ကို, Bloom တစ်ဦး, ချို JK, Sperry L ကို, ရော့စ်တီဂျေ, et al ။ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 157: 1789-1798 ။ [PubMed]
Garcia FD, Thibaut အက်ဖ်။ လိင်စွဲလမ်းမှု။ Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ ၂၀၁၀ [PubMed]
Girault ဂျေအေ၊ Valjent အီး၊ Caboche J၊ Herve ER ERK2: မူးယစ်ဆေးဝါးပလပ်စတစ်မှုအတွက်အရေးပါသောယုတ္တိတန်မှုနှင့်တံခါးပေါက်လား။ ဆေးဝါးဗေဒအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2007; 7: 77-85 ။ [PubMed]
ရွှေ SN, Heffner CL ။ လိင်စွဲ: များစွာသောအယူအဆ, အနည်းဆုံးဒေတာ။ Clin Psychol ဗျာ 1998; 18: 367-381 ။ [PubMed]
ဂိုမက်ဇ်ပင်နီလာ F၊ Ying Z၊ ရွိုင်း RR၊ Molteni R၊ Edgerton VR ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ခန်း neuroplasticity အားပေးအားမြှောက်တဲ့ BDNF-mediated ယန္တရားဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2002; 88: 2187-2195 ။ [PubMed]
Goodman A. လိင်စွဲ: အမည်နှင့်ကုသမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1992; 18: 303-314 ။ [PubMed]
Gosnell BA ဘွဲ့။ Sucrose စားသုံးမှုကိုကင်းထုတ်လုပ်အပြုအမူာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2005; 1031: 194-201 ။ [PubMed]
Gosnell BA, Levine AS ။ ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု - opioids ၏အခန်းကဏ္။ ။ Int J ကို Obes (Lond) 2009; 33 (ပျော့ပျောင်း 2): S54-58 ။ [PubMed]
Grant JE, Brewer JA, Potenza MN ။ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ neurobiology ။ CNN Spectrums ။ 2006a; 11: 924-930 ။ [PubMed]
Grant JE ကင်မ် SW ။ naltrexone နှင့်ဆက်ဆံ kleptomania နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ရာဇဝင်။ 2001; 13: 229-231 ။ [PubMed]
Grant JE, Potenza MN, Hollander E, Cunningham-Williams R, Nurminen T, Smits G စသည်တို့နှင့်တူညီကြသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် opioid ရန် nalmefene ၏ Multicenter စုံစမ်းစစ်ဆေး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2006b; 163: 303-312 ။ မှတ်ချက် [PubMed]
Grant JE, Potenza MN, Weinstein A, Gorelick DA ။ အမူအကျင့်စွဲနိဒါန်း။ Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ 2010; 36: 233-241 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Graybiel လေး အလေ့အကျင့်, ထုံးတမ်းများနှင့်အကဲဖြတ် ဦး နှောက်။ Annu ဗြာ Neurosci ။ 2008; 31: 359-387 ။ [PubMed]
Green TA, Alibhai IN, Roybal CN, Winstanley, CA, Theobald DE, Birnbaum SG, et al ။ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်စင်မှုသည်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာကိုထုတ်လုပ်သည်။ နျူကလိယအက်တမ်၌နိမ့်သောသံသရာ adenosine monophosphate တုန့်ပြန်မှုဒြပ်စင် (CREB) ၏လုပ်ဆောင်မှုကကမကထပြုသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67: 28-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Green TA၊ Cain ME၊ Thompson M၊ Bardo MT ။ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်စင်မှုသည်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်းဓာတ်ပြုခြင်းကိုလျှော့ချပေးသည်။ psychopharmacology (Berl) 2003; 170: 235-241 ။ [PubMed]
Greenough WT, Chang FF ။ ဦး နှောက် cortex အတွက် synapse ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပုံစံ၏ပလပ်စတစ်။ ခုနှစ်တွင်: ပီတာ A, ဂျုံးစ်အယ်ဒီတာများ။ နှောက် Cortex ။ vol ။ ၇ ။ နယူးယောက်:7စစ 1989-391 ။ ။
ဂရစ်ဖစ်အမ်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - တကယ်ရှိသလား။ In: အယ်ဒီတာ Gackenbach J ။ စိတ်ပညာနှင့်အင်တာနက်။ ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ San Diego မှ, CA: 1998 စစ 61-75 ။ ။
Grimm JW, Fyall လေး, Osincup DP ။ sucrose တဏှာ၏ပေါက်ဖွား: လျှော့ချသင်တန်းနှင့် sucrose Pre-တင်၏ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 84: 73-79 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, Shaham Y. Neuroadaptation ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ။ 2001; 412: 141-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grimm JW, Osincup: D, Wells B, Manaois M, Fyall A, Buse C, et al ။ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းမှုသည်ကြွက်များအားရှာဖွေခြင်းသည်သကြားဓာတ်ရှာဖွေခြင်းကို cue- သွေးဆောင်ခြင်းအားပြန်လည်ထူထောင်စေသည်။ Behav Pharmacol ။ 2008; 19: 777-785 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grueter BA, Gosnell HB, Olsen CM, Schramm-Sapyta NL, Nekrasova T, Landreth GE, et al ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် extracellular- signal ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase 1- မှီခို metabotropic အချိုမှု receptor 5- သွေးဆောင်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Neurosci ။ 2006; 26: 3210-3219 ။ [PubMed]
Haber SN, Fudge JL, McFarland ရော်ဘာ။ မျောက်ဝံများအတွက် Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsolateral striatum ဖို့ shell ကိုတစ်ဦးထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလိမ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 2369-2382 ။ [PubMed]
Hammer RP ။ , Jr. Cocaine သည် ဦး နှောက်၏အရေးပါသောနေရာများတွင်စည်းနှောင်ထားသော opiate receptor ကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ Synapse ။ 1989; 3: 55-60 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင်ပြေးစက်များစဉ်အတွင်း Hattori S က, Naoi M က, Nishino အိပ်ချ် Striatal dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: အရှိန်မြှင့်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဦး နှောက် Res Bull ။ 1994; 35: 41-49 ။ [PubMed]
သူ S, Grasing K. နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုသည်ဘိန်းထုတ်ယူပြီးနောက်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2004; 75: 215-221 ။ [PubMed]
Hebb DO ။ ရင့်ကျက်မှုရှိစဉ်ပြsolvingနာကိုဖြေရှင်းရန်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှု Am Psychol ။ 1947; 2: 306-307 ။
ခွံရှိ VL, Chakravarty S က, Nestler EJ, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2009; 8: 442-449 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Herman JP, Stinus L, Le Moal အမ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုသည်အမ်ဖီတမင်းအနေဖြင့် locomotor တုန့်ပြန်မှုကိုတိုးစေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1984; 84: 431-435 ။ [PubMed]
Hoebel BG၊ Avena NM, Bocarsly ME, Rada P. Natural စွဲလမ်းမှု - ကြွက်များတွင်သကြားစွဲခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အမူအကျင့်နှင့်တိုက်နယ်ပုံစံ။ စွဲဆေးပညာဂျာနယ်။ 2009; 3: 33-41 ။ [PubMed]
Hoebel BG, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Schwartz DH, မာကု GP, Hunter GA ။ သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့ဂယက်: အူလမ်းကြောင်းအပြုအမူစဉ်အတွင်း ဦး နှောက် norepinephrine, serotonin နှင့် dopamine ထုတ်လွှတ်၏ microrodialysis လေ့လာမှုများ။ နယူးယောက်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်; နယူးယောက်: 1989 ။
Hoeft F, Watson CL, Kesler SR, Bettinger KE, Reiss AL ။ ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားနေစဉ် mesocorticolimbic စနစ်၏ကျား၊ မကွဲပြားမှုများ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2008; 42: 253-258 ။ [PubMed]
Hoffmann P, Thoren P, Ely D. Effect ၏ပွင့်လင်းကွင်းဆင်းအပြုအမူနှင့်အလိုအလျောက်သွေးတိုးရောဂါကြွက် (SHR) Behav Neural Biol တွင်ကျူးကျော်ရန်ဆန္ဒအလျောက်လေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ 1987; 47: 346-355 ။ [PubMed]
Holden C. 'အပြုအမူ' စွဲချက်များ - သူတို့တည်ရှိနေသလား။ သိပ္ပံ 2001; 294: 980-982 ။ [PubMed]
Horvitz JC, Stewart က T က, Jacobs BL ။ ventral tegmental dopamine အာရုံခံ၏ပြင်းစွာတိုက်လှုပ်ရှားမှုဟာနိုးကြောင်အတွက်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းနေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 759: 251-258 ။ [PubMed]
Hosseini M၊ Alaei HA၊ Naderi A၊ Sharifi MR၊ Zahed R. Treadmill လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်ကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ရောဂါဗေဒ။ 2009; 16: 3-7 ။ [PubMed]
Hudson JI, Hiripi E, Pope HG, Jr. Kessler RC ။ National Comorbidity Survey Replication တွင်အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 348-358 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2006; 29: 565-598 ။ [PubMed]
Ifland JR, Preuss HG, Marcus MT, Rourke KM, တေလာ WC, Burau K သည်, et al ။ သန့်စင်ပြီးအစားအသောက်စွဲလမ်း: တစ်ဂန္ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ။ Med ယူဆချက်။ 2009; 72: 518-526 ။ [PubMed]
Inciardi ဂျေအေ, မာတင်အက်စ်အက်စ်, Surratt HS ။ အကျဉ်းထောင်များနှင့်အလုပ်မှလွတ်မြောက်လာသောကုထုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်း - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ။ ခုနှစ်တွင်: Rawlings B, Yates R ကို, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏ကုသမှုများအတွက်ကုထုံးအသိုင်းအဝိုင်း။ ဂျက်စီကာ Kingsley; လန်ဒန်: 2001 စစ 241-256 ။ ။
စိတ်ပညာ၏ဂျိမ်းစ်ဒဗလျူအခြေခံမူ။ အိပ်ချ် Holt နှင့်ကုမ္ပဏီ; နယူးယောက်: 1890 ။
Janal MN, Colt EW, Clark WC, Glusman M. Pain sensitivity, ခံစားမှုနှင့်ပလာစမာ endocrine အဆင့်များကိုတာဝေးပြေးပြီးနောက်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။ naloxone ၏သက်ရောက်မှုများ။ နာကျင်မှု။ 1984; 19: 13-25 ။ [PubMed]
Jentsch JD, Woods JA, Groman SM, Seu E. အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် Balloon Analog Risk Task ၏ကြွက်သားဗားရှင်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖျန်ဖြေပေးသောအာရုံကြောယန္တရားများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 1797-1806 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျွန်ဆင် pm တွင်, Kenny PJ ။ အဝလွန်ကြွက်များတွင်စွဲတူသောဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် compulsive စား Dopamine D2 receptors ။ နတ် neuroscience ။ 2010; 13: 635-641 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kaas JH ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်အာရုံခံကိရိယာနှင့်မော်တာမြေပုံများ၏ပလပ်စတစ်မှု။ Annu ဗြာ Neurosci ။ 1991; 14: 137-167 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Lalumiere RT, Knackstedt L, Shen H. Glutamate ဆေးစွဲမှု။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 169-173 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kalivas PW, ဆန္ဒပြ neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ် O 'Brien C. မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 166-180 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Richardson-Carlson R၊ Van Orden G. ခြေလျင်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် enkephalin သွေးဆောင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုတို့အကြား Cross-sensitization ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1986; 21: 939-950 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Stewart J. Dopamine ဂီယာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်မော်တာအားလှုပ်ရှားမှု၏အာရုံစူးစိုက်မှု။ Brain Res Brain Res Rev. 1991; 16: 223-244 ။ [PubMed]
Kanarek RB, D'Anci KE, Jurdak N၊ Mathes WF ။ အပြေးနှင့်စွဲ: လှုပ်ရှားမှု -based anorexia တစ်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်မိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာ။ Behav Neurosci ။ 2009; 123: 905-912 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kanarek RB၊ Marks-Kaufman R၊ D'Anci KE၊ Przypek ဂျေလေ့ကျင့်ခန်းတွင်ကြွက်များတွင်အမ်ဖီတမင်း၏ပါးစပ်စားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1995; 51: 725-729 ။ [PubMed]
Kandel E, Schwartz J, အာရုံကြောသိပ္ပံ Jessell T. အခြေခံမူ။ McGraw-Hill ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ နယူးယောက်: 2000 ။
Karama က S, Lecours AR, Leroux JM, Bourgouin P ကို, Beaudoin, G, Joubert S, et al ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုစဉ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတွင် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သည့်နေရာများ။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2002; 16: 1-13 ။ [PubMed]
Kasanetz က F, Deroche-Gamonet V ကို, Berson N ကို, Balado အီး, Lafourcade M က, Manzoni အို et al ။ ဆေးစွဲရန်အကူးအပြောင်းသည်ပလတ်စတစ်အရိပ်အောက်ရှိချွတ်ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံ 2010; 328: 1709-1712 ။ [PubMed]
Kauer ဂျာ၊ Malenka RC ။ Synaptic ပလပ်စတစ်နှင့်စွဲ။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2007; 8: 844-858 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ဗဟိုမှမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှု - အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှု။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2004; 27: 765-776 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3306-3311 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Will MJ, Steininger TL, Zhang က M ကို, Haber SN ။ အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (ချောကလက် (R) အာမခံ) ၏ကန့်သတ်နေ့စဉ်စားသုံးမှု striatal enkephalin ဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 2592-2598 ။ [PubMed]
Kelly TH, Robbins, G, Martin, CA, Fillmore MT, Lane SD, Harrington NG, et al ။ တစ် ဦး ချင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းချက်များ - d-amphetamine နှင့် sensation-seek status ။ psychopharmacology (Berl) 2006; 189: 17-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kenny PJ ။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2007; 28: 135-141 ။ [PubMed]
Kim က SW, Grant က je, Adson DE, ရှင် YC ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ ဟားဗတ်။ 2001; 49: 914-921 ။ [PubMed]
ဝယ်ယူမှု၏ Knutson B, Rick S, Wimmer GE, Prelec: D, Loewenstein G. အအာရုံကြောခန့်မှန်း။ Neuron ။ 2007; 53: 147-156 ။ မှတ်ချက် [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koepp MJ, Gunn RN, Lawrence အေဒီ, Cunningham VJ, Dagher A, Jones T, et al ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုအတွင်း striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအထောက်အထား။ သဘာဝ။ 1998; 393: 266-268 ။ [PubMed]
Kohlert JG, Meisel RL ။ လိင်မှုအတွေ့အကြုံသည်မိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနျူကလိယသည်ဆီးရီးယား hamsters များ၏ dopamine တုန့်ပြန်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 1999; 99: 45-52 ။ [PubMed]
Kolb B, Whishaw အိုင်ကျူ။ ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်နှင့်အပြုအမူ။ Annu ဗြာ Psychol ။ 1998; 49: 43-64 ။ [PubMed]
Komisaruk BR, Whipple B, Crawford A, Liu WC, Kalnin A, Mosier K. Brain သည်မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါ vaginalocervical ကိုယ်တိုင်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ပြုစဉ်အတွင်းကျောရိုးအပြည့်ထိခိုက်မှုနှင့်အတူ fMRI ၏သက်သေအထောက်အထား။ ဦး နှောက်သုတေသန။ 2004; 1024: 77-88 ။ [PubMed]
Koob, G, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 1149-1159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf ။ စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းအတွက် CRF နှင့် CRF-related peptides ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 1314: 3-14 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob GF, Kenneth Lloyd, G, Mason BJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့ဆေးဝါးကုထုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခု Rosetta ကျောက်ချဉ်းကပ်။ နတ်ဗြာမူးယစ်ဆေး Discov ။ 2009; 8: 500-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 24: 97-129 ။ [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းအတွက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့အ Neurobiological ယန္တရားများ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3113-3123 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob GF၊ Stinus L၊ Le Moal M, Bloom FE ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ: opiate မှီခို၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့် neurobiological သက်သေအထောက်အထား။ Neurosci Biobehav ဗျာ 1989; 13: 135-140 ။ [PubMed]
Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 217-238 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koya အီး, Uejima JL, Wihbey KA, Bossert JM, Hope BT, ကိုချင်တပ်မက်မှု၏ပေါက်ဖွားမှုအတွက် ventral medial prefrontal cortex ၏ Shaham Y. အခန်းက္ပ။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 177-185 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lader အမ် Antiparkinsonian ဆေးနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2008; 22: 407-416 ။ [PubMed]
Laviola G, Hannan AJ, Macri S, Solinas M, Nabegenerative ရောဂါများနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအပေါ်သန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ Jaber M. Effects Neurobiol Dis ။ 2008; 31: 159-168 ။ [PubMed]
Le Magnen J. စားနပ်ရိက္ခာဆုနှင့်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ခုနှစ်တွင်: Capaldi ED, Powley TL, အယ်ဒီတာများ။ အရသာ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး။ အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်း၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1990 စစ 241-254 ။ ။
အမူအကျင့်မှီခိုမှု Lejoyeux M, Mc Loughlin M, Adinverted- es es J. Epidemiology: စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်မူလလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များ။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု: ဥရောပစိတ်ရောဂါအထူးကုအသင်း၏ဂျာနယ်။ 2000; 15: 129-134 ။ [PubMed]
Lejoyeux M, Weinstein အေမငြိမ်မသက်ဝယ်ခြင်း။ Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ 2010; 36: 248-253 ။ [PubMed]
Lenoir M, Ahmed SH ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအစားထိုးပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်းသည်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 2272-2282 ။ [PubMed]
Lenoir M၊ Serre F၊ Cantin L၊ Ahmed SH ။ ပြင်းထန်သောအရသာသည်ကိုကင်းအကျိုးကိုသာလွန်သည်။ PLOS ONE ။ 2007; 2: e698 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Leri F, Flores J, Rajabi H, Stewart J. ဂျိုင်းဘိန်းဖြူနှင့်ထိတွေ့သည့်ကြွက်များတွင်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 28: 2102-2116 ။ [PubMed]
လက်တ BT ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုစိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်ထက်လျော့။ Psychopharmacology (Berl) 1989; 98: 357-362 ။ [PubMed]
Lett BT, Grant VL, Byrne MJ, Koh MT ။ ဘီးလည်ပတ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူထူးခြားသောအခန်းတစ်ခု၏တွဲဖက်မှုကနေရာကို ဦး စားပေးသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2000; 34: 87-94 ။ [PubMed]
Leung KS, Cottler LB. ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှု။ Curr Opin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 22: 69-74 ။ [PubMed]
Lin S၊ သောမတ်စ် TC၊ Storlien LH, Huang XF C57Bl / 6J ကြွက်များတွင်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအသောက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဝလွန်ခြင်းနှင့် leptin ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။ Int J Obes Relat Metab Disord ။ 2000; 24: 639-646 ။ [PubMed]
Lindholm S က, Ploj K ကို Franck J ကို, Nylander ဗြဲထပ်ခါတစ်လဲလဲအီသနောအုပ်ချုပ်ရေးရေတိုနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ enkephalin နှင့် dynorphin တစ်ရှူးပြင်းအားအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ အရက်။ 2000; 22: 165-171 ။ [PubMed]
Liu X၊ Palmatier MI, Caggiula AR, Donny EC, Sved AF ။ ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း၏ရန်သူများအားဖြင့်နီကိုတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်၎င်း၏ attenuation တိုးမြှင့်အားဖြည့်။ psychopharmacology (Berl) 2007; 194: 463-473 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Loretti, G, Angelucci A, Morando L, Boggio EM, Giustetto M, Pizzorusso T. အစောပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှု MeCP2 null ကြွက်များ၏အမူအကျင့်နှင့် synaptic phenotype သည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67: 657-665 ။ [PubMed]
Lowery EG, Thiele TE ။ corticotropin-releasing factor (CRF) receptor antagonists သည်အရက်ယမကာကိုဆေးဝါးကုသရန်အတွက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းလက်တွေ့မတိုင်မီသက်သေအထောက်အထား။ CNS Neurol သည်မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်မှတ်များကိုဖျက်စီးသည်။ 2010; 9: 77-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
lu, L, Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ကိုကင်းတဏှာ၏ Shaham Y. ပေါက်ဖွားဆုတ်ခွာပြီးနောက်: preclinical အချက်အလက်များ၏သုံးသပ်ချက်။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 214-226 ။ [PubMed]
လူး L၊ Koya E၊ Zhai H၊ မျှော်လင့်ချက် BT၊ ERK ၏ Shaham Y. အခန်းကဏ္ add ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci ။ 2006; 29: 695-703 ။ [PubMed]
Luscher ကို C, Bellone C. ကိုကင်း - evoked Synaptic ပလပ်စတစ်: စွဲဖို့အဓိကသော့ချက်? နတ်နေရော့စီ။ 2008; 11: 737-738 ။ [PubMed]
Lynch WJ, Piehl KB, Acosta G, Peterson AB, Hemby SE ။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကိုကာကိုလာရှာဖွေသည့်အပြုအမူနှင့် Prefrontal Cortex တွင်ပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းအားပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၁၀ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
MacRae PG, Spirduso WW, Walters TJ, Farrar RP, Wilcox RE ။ Presenescent အဟောင်းကြွက်များတွင် striatal D2 dopamine receptor ၏စည်းနှောင်မှုနှင့် striatal dopamine metabolites အပေါ်ခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 1987; 92: 236-240 ။ [PubMed]
ဗိုလ်မှူး M က, Turchan J ကို, Smialowska M က, Przewlocka ခမော်ဖင်းအကိုက်နှင့် amygdala ၏ကြွက်အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွက် CRF biosynthesis အပေါ်ကိုကင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Neuropeptides ။ 2003; 37: 105-110 ။ [PubMed]
Majewska MD ။ တစ် ဦး အာရုံကြောရောဂါအဖြစ်ကိုကင်းစွဲ: ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ NIDA Res Monogr ။ 1996; 163: 1-26 ။ [PubMed]
Mameli M, Bellone C, Brown MT, Luscher C. Cocaine တို့သည်အမြစ်များ tegmental inရိယာ၌အချိုမှုပြန့်ပွားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြောင်းသည်။ နတ်နေရာသစ်။ ၂၀၁၁ [PubMed]
Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ Postcocaine anhedonia ။ ကိုကင်းဆုတ်ခွာ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 1991; 4: 17-26 ။ [PubMed]
Marks I. အပြုအမူဆိုင်ရာ (ဓာတုမဟုတ်သော) စွဲချက်များ။ (မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ) British Journal of စွဲ။ 1990; 85: 1389-1394 ။ [PubMed]
Martinez ငါသိပ်မရှိပါဘူး RG ။ သာ Self-ပွေးညီမိတ်လိုက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ကြွက်များတွင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 510-517 ။ [PubMed]
မာ့က်စ် MH, Henderson RL, Roberts သည် CL ။ အဘယ်သူမျှမအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်နှင့်အတူမှောင်မိုက် operant pretests အောက်ပါအလင်းလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဘား - နှိပ်တုံ့ပြန်မှု၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်။ J ကို Comp Physiol Psychol ။ 1955; 48: 73-76 ။ [PubMed]
McBride WJ လီ TK ။ အသည်းရောဂါ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ - ကြွက်များတွင်အရက်သောက်ခြင်းမြင့်မားသည့်အပြုအမူ၏ neurobiology ။ ဗြာ Neurobiol ဝေဖန်။ 1998; 12: 339-369 ။ [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ ပြောင်းလဲဗီဇစကားရပ်အားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ Neuroplasticity ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 3-17 ။ [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 132: 146-154 ။ [PubMed]
McDaid J, Dallimore JE, Mackie AR, Napier TC ။ မော်ဖင်းအကိုက် - အာရုံခံကြွက်များတွင် accumbal နှင့် pallidal pCREB နှင့် deltaFosB ပြောင်းလဲမှုများ: အ ventral pallidum အတွက် receptor- evoked electrophysiological အစီအမံနှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2006a; 31: 1212-1226 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McDaid J, ဂရေဟမ်အမတ် Napier TC ။ Methamphetamine သွေးဆောင်မှုသည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် pCREB နှင့် DeltaFosB တို့ကိုကွဲပြားခြားနားစွာပြောင်းလဲစေသည်။ Mol Pharmacol ။ 2006b; 70: 2064-2074 ။ [PubMed]
McElroy SL, Hudson JI, Capece JA, Beyers K၊ Fisher AC, Rosenthal NR ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုရောဂါကုသမှုအတွက် Topiramate - ရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သောလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 1039-1048 ။ [PubMed]
Meisel RL၊ စခန်း DM၊ ရော်ဘင်ဆင်တီ။ အမျိုးသမီးဆီးရီးယား hamsters အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း ventral striatal dopamine ၏တစ် ဦး က microdialysis လေ့လာမှု။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 1993; 55: 151-157 ။ [PubMed]
Meisel RL, Mullins AJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံ: ဆယ်လူလာယန္တရားများနှင့်အလုပ်လုပ်အကျိုးဆက်များ။ Brain Res ။ 2006; 1126: 56-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mellen J, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ Sevenich MacPhee အမ်ဒPhilန: အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံဇီဝဗေဒ။ 2001; 20: 211-226 ။
Mermelstein PG, Becker က JB ။ paced copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက်တိုးမြှင့် extracellular dopamine ။ Behav Neurosci ။ 1995; 109: 354-365 ။ [PubMed]
Meyer AC၊ Rahman S၊ Charnigo RJ, Dwoskin LP, Crabbe JC, Bardo MT ။ မျိုးရိုးဗီဇအသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ အမ်ဖီတမင်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်မွေးရာပါကြွက်များကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း။ မျိုးဗီဇ ဦး နှောက် Behav ။ ၂၀၁၀ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Molteni R, Ying Z, Gomez-Pinilla အက်ဖ်။ အက်စစ်၏ပြင်းထန်သောနှင့်ကြာရှည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် microarray မှထုတ်လွှင့်သောကြွက်ဟီပိုပိုကပ်တွင်ပလတ်စတစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မျိုးဗီဇများအပေါ်သက်ရောက်သည်။ Eur J ကို Neurosci ။ 2002; 16: 1107-1116 ။ [PubMed]
et al Nader MA, Daunais JB, Moore T, Nader SH, Moore RJ, Smith HR ။ rhesus မျောက်များရှိ striatal dopamine စနစ်များအပေါ်ကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ: ကန ဦး နှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 35-46 ။ [PubMed]
Nair စင်ကာပူ၊ Adams-Deutsch T, Epstein DH, Shaham Y. အစားအစာရှာဖွေခြင်းအတွက်အာရုံကြောဆေးဝါးဗေဒ၊ နည်းနာ၊ အဓိကတွေ့ရှိချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Neurobiol Prog ။ 2009a; 89: 18-45 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nair စင်ကာပူ၊ Adams-Deutsch T, Epstein DH, Shaham Y. အစားအစာရှာဖွေခြင်းအတွက်အာရုံကြောဆေးဝါးဗေဒ၊ နည်းနာ၊ အဓိကတွေ့ရှိချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Neurobiol Prog ။ 2009b [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု့ (NIDA) စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု (NIMH) ဆီးချိုရောဂါနှင့်အစာကြေနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (NIDDK) ဆုလာဘ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - အခွင့်အလမ်းများနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွှန်ချက်များ။ Neuron ။ 2002; 36: 189-192 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Kelz MB, Chen J. DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြောနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပလပ်စတစ်၏မော်လီကျူးပြုပြီ။ Brain Res ။ 1999; 835: 10-17 ။ [PubMed]
Nithianantharajah J ကို, Hannan AJ ။ ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်၊ အတွေ့အကြုံ - မှီခိုရသည့်ပလပ်စတစ်နှင့်အာရုံကြောစနစ်၏ရောဂါများ။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2006; 7: 697-709 ။ [PubMed]
Noonan MA, Bulin SE၊ Fuller DC၊ Eisch AJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal neurogenesis ကိုလျှော့ချခြင်းသည်ကိုကင်းဆေးစွဲသည့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တွင်အားနည်းချက်ကိုပေးသည်။ J ကို Neurosci ။ 2010; 30: 304-315 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
O 'Brien က CP ။ relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဆေးဝါးများ Anticraving: psychoactive ဆေးဝါးများတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအသစ်သောအတန်းအစား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1423-1431 ။ [PubMed]
O'Brien CP ။ Tao et al အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ (၂၀၁၀) - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့် DSM-V ။ စွဲ။ 2010; 2010: 105 ။
O'Brien က MS, အန်သိုနီ JC ။ ကိုကိုးမှီခိုသူဖြစ်လာခြင်းအန္တရာယ် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာခန့်မှန်းမှုများ၊ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ။ Neuropsychopharmacology ။ 2000 [PubMed]
O'Donnell JM, Miczek KA ။ ကြွက်များတွင် d-amphetamine ၏ antiaggressive အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသည်းမခံပါ။ Psychopharmacology (Berl) 1980; 68: 191-196 ။ [PubMed]
Olausson P ကို, Jentsch JD, Tronson N ကို, Neve RL, Nestler EJ, တေလာ JR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DeltaFosB အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 9196-9204 ။ [PubMed]
Olsen CM, Childs DS, Stanwood GD, Winder DG ။ Operant အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည် metabotropic glutamate receptor5(mGluR5) PLoS One လိုအပ်သည်။ 2010; 5: e15085 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Olsen CM, Duvauchelle CL ။ SCH 23390 ၏ Intra-prefrontal cortex ထိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနျူကလိယ dopamine အဆင့်ကို 24 ဇ Post- ပြုတ်ရည် accumbens ။ Brain Res ။ 2001; 922: 80-86 ။ [PubMed]
Olsen CM, Duvauchelle CL ကိုကင်း၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ prefrontal cortex D1 မော်ဂျူ။ ဦး နှောက်သုတေသန။ 2006; 1075: 229-235 ။ [PubMed]
Olsen CM, Winder DG ။ Operant sensation သည်အာရုံကြောအလွှာများနှင့် C57 ကြွက်များတွင်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 1685-1694 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Olsen CM, Winder DG ။ Operant အာရုံကိုမောက်စ်တွင်ရှာဖွေသည်။ J Vis Exp ။ ၂၀၁၀ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Olson AK, Eadie bd, Ernst C, Christie BR ။ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းမှုနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampus တွင် neurogenesis ကိုအကြီးအကျယ်တိုးပွားစေနိုင်သည်။ Hippocampus ။ 2006; 16: 250-260 ။ [PubMed]
Orford ဂျေ Hypersexuality: မှီခိုတဲ့သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်။ Br J စွဲလမ်းအရက်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ 1978; 73: 299-210 ။ [PubMed]
Ostlund SB, Balleine BW ။ အလေ့အကျင့်များနှင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ် - မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုဆက်စပ်သည့်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ယနေ့ခေတ်မူးယစ်ဆေးဝါး Discov 2008; 5: 235-245 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Packard MG, Knowlton BJ ။ Basal Ganglia ၏သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များ။ Annu ဗြာ Neurosci ။ 2002; 25: 563-593 ။ [PubMed]
Paredes RG, Vazquez B. အမျိုးသမီးကြွက်တွေဟာလိင်မှုကိစ္စကိုဘယ်လိုသဘောကျသလဲ။ အဖော်လိုက်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 1999; 105: 117-127 ။ [PubMed]
Petri မိုင်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏အတိုင်းအတာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းထည့်သွင်းရန်ကျယ်ပြန့်ခြင်းကိုသငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1): 152-160 ။ [PubMed]
Piazza PV, Deminiere JM, Le Moal က M, စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းကိုရှိမုနျအိပ်ချ်အချက်များ။ သိပ္ပံ။ 1989; 245: 1511-1513 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Vanderschuren LJ ။ အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း - ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ Neurosci Biobehav ဗျာ ၂၀၁၀ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand NM, Yu L, Coolen LM ။ သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သည့် mesolimbic စနစ်အတွက် Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010a; 67: 872-879 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အိုး KK, Frohmader KS, Vialou V, Mouzon E, Nestler EJ, Lehman MN, et al ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားဖြည့်များအတွက်အရေးပါသည်။ မျိုးဗီဇ ဦး နှောက် Behav ။ 2010b [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Porrino LJ, Daunais JB, Smith HR, Nader MA ။ ကိုကင်း၏ကျယ်ပြန့်သောသက်ရောက်မှုများ Neurosci Biobehav ဗျာ 2004a; 27: 813-820 ။ [PubMed]
Porrino LJ, Lyons: D, Smith HR, Daunais JB, Nader MA ။ ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ခြေလက်၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် sensorimotor striatal ဒိုမိန်းများတွင်တိုးတက်မှုများပါ ၀ င်သည်။ J ကို Neurosci ။ 2004b; 24: 3554-3562 ။ [PubMed]
Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1): 142-151 ။ [PubMed]
Potenza MN ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3181-3189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Potenza MN ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အရေးကြီးပုံ - စွဲလမ်းမှုအတွက်ဘာသာပြန်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 2623-2624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Prochaska JJ, Hall SM, Humfleet G, Munoz RF, Reus V, Gorecki J စသည်တို့။ ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုသည်ဆေးရွက်ကြီးကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မဟာဗျူဟာအနေဖြင့်ကျပန်းစမ်းသပ်ခြင်း။ Prev Med ။ 2008; 47: 215-220 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rampon C၊ Tang YP၊ Goodhouse J၊ Shimizu E၊ Kyin M, Tsien JZ ။ သန့်စင်မှုသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများနှင့် CA1 NMDAR1-knockout ကြွက်များတွင် nonspatial memory memory ရှိခြင်းမှပြန်လည်နာလန်ထူလာစေသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 2000; 3: 238-244 ။ [PubMed]
Rauschecker JP ။ အာရုံ cortical ပလပ်စတစ်: အခြားအာရုံခံစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci ။ 1999; 22: 74-80 ။ [PubMed]
Rebec GV, Christensen JR, Guerra C, Bardo MT ။ အခမဲ့နှင့်ရွေးချယ်မှုအသစ်အဆန်းစဉ်အတွင်းနျူကလိယအတွက် Real-time dopamine efflux အတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှင့်ယာယီကွဲပြားခြားနားမှု။ ဦး နှောက်သုတေသန။ 1997a; 776: 61-67 ။ [PubMed]
Rebec GV, Grabner CP၊ Johnson M၊ Pierce RC, Bardo MT ။ medial prefrontal cortex နှင့်နျူကလိယအတွက် catecholaminergic လှုပ်ရှားမှုအတွက်ယာယီတိုးအသစ်အဆန်းစဉ်အတွင်း shell ကို accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1997b; 76: 707-714 ။ [PubMed]
Rivalan M, Ahmed SH, Dellu-Hagedorn F. F. အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သူများသည် Iowa Gambling Task ၏ကြွက်ဗားရှင်းတွင်မှားသောရွေးချယ်မှုများကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66: 743-749 ။ [PubMed]
ကိုကာကိုလာကိုကြွက်တွေဘယ်လိုစွဲလမ်းစေမလဲ Roberts DC, Morgan D, Liu Y. Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1614-1624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် DL, Carelli RM ။ နျူကလိယ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံခံအာရုံခံ accumbens ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန် operant encode ။ Eur J ကို Neurosci ။ 2008; 28: 1887-1894 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအသိစိတ်ကိုစတီရိုရှိ striatal တစ်သျှူးမှအမ်ဖီတမင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တွဲဖက်ထားသည်။ Eur J ကို Pharmacol ။ 1982; 85: 253-254 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မက်လုံးပေး-sensitive နှင့်စွဲလမ်း။ စွဲလမ်း။ 2001; 96: 103-114 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3137-3146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။ [PubMed]
ရော်ဂျာ PJ, Smit HJ ။ စားနပ်ရိက္ခာတဏှာနှင့်အစာ "စွဲ": တစ် biopsychosocial ရှုထောင့်ကနေသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအရေးပါပြန်လည်သုံးသပ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 66: 3-14 ။ [PubMed]
Rothwell NJ, စတော့အိတ် MJ ။ အစားအစာ - သွေးဆောင် thermogenesis အတွက်အညိုရောင် adipose တစ်ရှူးများအတွက်အခန်းကဏ္။ ။ သဘာဝ။ 1979; 281: 31-35 ။ [PubMed]
Rothwell NJ, စတော့အိတ် MJ ။ တိရိစ္ဆာန်များတွင်အဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: အစားအသောက်အချက်များ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Clin Endocrinol Metab ။ 1984; 13: 437-449 ။ [PubMed]
Routtenberg အေ။ လှုပ်ရှားမှုဘီးတွင်နေထိုင်သောကြွက်များ၏“ ကိုယ်တိုင်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု” - လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Comp Physiol Psychol ။ 1968; 66: 234-238 ။ [PubMed]
Routtenberg A, Kuznesof AW ။ လှုပ်ရှားမှုဘီးတွင်နေထိုင်သောကြွက်များအားအစာငတ်။ အစားအစာကျွေးခြင်း။ J ကို Comp Physiol Psychol ။ 1967; 64: 414-421 ။ [PubMed]
Russo SJ, Dietz DM, Dumitriu: D, Morrison JH, Malenka RC, Nestler EJ ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010; 33: 267-276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rylkova: D, Shah HP၊ Small E, Bruijnzeel AW ။ ကြွက်များတွင်နာတာရှည်အရက်အရည်ဓာတ်စာကိုရပ်စဲပြီးနောက် ဦး နှောက်ဆုချသည့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်စူးရှပြီးကြာရှည်သောစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်လိုငွေပြမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2009; 203: 629-640 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 37: 577-582 ။ [PubMed]
Sahay A, စိတ်ကျရောဂါအတွက် Hen R. အရွယ်ရောက် hippocampal neurogenesis ။ နတ်နေရာသစ်။ 2007; 10: 1110-1115 ။ [PubMed]
Sarnyai Z ကို, Shaham Y ကို, Heinrich SC ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် corticotropin-releasing အချက်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Pharmacol ဗျာ 2001; 53: 209-243 ။ [PubMed]
Schaffer SD က, Zimmerman ML ။ လိင်စွဲလမ်းမှု - အဓိကစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု။ သူနာပြုဆရာမ။ 1990; 15: 25-26 ။ မှတ်ချက် [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, Olsen CM, Winder DG ။ ကိုကာကိုလာကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်မောက်ကလာပ်စည်း accumbens ခွံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တုံ့ပြန်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 1444-1451 ။ [PubMed]
Schulteis, G, Markou တစ် ဦး, ကိုးလ် M က, Koob GF ။ အီသနောထုတ်ယူမှုမှထုတ်လုပ်သော ဦး နှောက်ဆုလာဘ်လျော့နည်းသွားသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1995; 92: 5880-5884 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schwarz L ကို, Kindermann ဒဗလျူအေရိုးဗစ်နှင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေလေ့ကျင့်ခန်းကိုတုံ့ပြန်အဖြစ် beta-endorphin အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများ။ အားကစား Med ။ 1992; 13: 25-36 ။ [PubMed]
Segal DS, Mandell AJ ။ d-amphetamine ၏ရေရှည်အုပ်ချုပ်မှု: မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အသွင်မြင်လာအောင်၏တိုးတက်သောတိုးပွားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1974; 2: 249-255 ။ [PubMed]
Segovia, G, Del Arco, De Blas M, Garrido P, Mora F. ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်စင်မှုသည် in vivo သည်နျူးကလီးယပ်စ်တွင် dopamine ၏ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားစေသည် - microdialysis လေ့လာမှု။ J ကိုအာရုံကြော Transm ။ ၂၀၁၀ [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Annu ဗြာ Neurosci ။ 1995; 18: 463-495 ။ [PubMed]
Shaham Y၊ Shalev U၊ Lu L၊ De Wit H, Stewart J. J. မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပုံစံ၊ သမိုင်း၊ နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ စိတ်ပညာ။ 2003; 168: 3-20 ။ မှတ်ချက် [PubMed]
Shalev U, Tylor A, Schuster K, Frate C, Tobin S, Woodside B. Perinatal နှင့်နို့ကွာချိန်ကာလအတွင်းအလွန်အာနိသင်သောအာဟာရဓာတ်နှင့်ထိတွေ့မှု၏ရေရှည်ဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ Physiol Behav ။ ၂၀၁၀ [PubMed]
Shippenberg TS, Heidbreder C. အသိကိုကင်းများ၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှ: pharmacological နှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995; 273: 808-815 ။ [PubMed]
Simpson DM, တော်တော်များများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြီးတွင်အန်ဂျူး Z. အမူအကျင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1977; 7: 59-64 ။ [PubMed]
Sinclair JD, Senter RJ ။ ကြွက်များတွင်တစ်ဦးအရက်-ဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ QJ လုံးအရက်။ 1968; 29: 863-867 ။ [PubMed]
Skinner BF ။ အချို့သော Eating Reflex များကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်အခြေအနေများအကြောင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1930; 16: 433-438 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Smith က GB ကို, Heynen AJ, ထမ်းရွက် MF ။ အမြင်အာရုံ cortex အတွက် Ocular ကြီးစိုးပလပ်စတစ်၏ bidirectional synaptic ယန္တရားများ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2009; 364: 357-367 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Smith က MA, Schmidt က KT, Iordanou JC, Mustroph ML ။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကိုကင်း၏အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2008; 98: 129-135 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Solecki W, Ziolkowska B, Krowka T, Gieryk A, Filip M, Przewlocki R. ကြွက် mesocorticolimbic စနစ်အတွင်း prodynorphin ဗီဇဖော်ပြချက်အားဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲမှု။ Brain Res ။ 2009; 1255: 113-121 ။ [PubMed]
Solinas M၊ Chauvet C၊ Thiriet N၊ El Rawas R, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှုအားဖြင့်ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုကို Jaber အမ်ပြောင်းပြန်ပြောင်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2008; 105: 17145-17150 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Solinas M, Thiriet N, Chauvet C, Jaber M. ပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှုဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ Neurobiol Prog ။ ၂၀၁၀ [PubMed]
Solinas M, Thiriet N, El Rawas R, Lardeux V, Jaber M. ပတ်ဝန်းကျင်ကြွယ်ဝမှုသည်ကိုကိန်း၏အပြုအမူ၊ အာရုံကြောဓာတုနှင့်မော်လီကျူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 1102-1111 ။ [PubMed]
Solomon RL ။ ဝယ်ယူလှုံ့ဆော်မှု၏ပြိုင်ဘက် - ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ: အပျြောအပါး၏ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်နာကျင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ Am Psychol ။ 1980; 35: 691-712 ။ [PubMed]
ရှောလမုန်သည် RL, Corbit JD ။ လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုပြိုင်ဘက် - ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ။ ထိခိုက်မှု၏ဗြဲယာယီဒိုင်းနမစ်။ Psychol ဗျာ 1974; 81: 119-145 ။ [PubMed]
Spanagel R ကို, Holter SM ။ ထပ်ခါတလဲလဲအရက်ချို့တဲ့အဆင့်နှင့်အတူရေရှည်အရက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်: အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်? အရက်။ 1999; 34: 231-243 ။ [PubMed]
Spangler R ကို, Goddard NL, Avena မိုင်, Hoebel BG, Leibowitz SF ။ မော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန်အတွက်ကြွက်ဦးနှောက်၏ dopaminergic နှင့် dopaminoceptive ဒေသများတွင် elevated D3 dopamine အဲဒီ receptor mRNA ။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2003; 111: 74-83 ။ [PubMed]
Spangler R ကို, Wittkowski KM, Goddard NL, Avena မိုင်, Hoebel BG, Leibowitz SF ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများရှိမျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်သကြား Opiate ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 124: 134-142 ။ [PubMed]
Spiers TL, Hannan AJ ။ သဘာဝ၊ ပျိုးထောင်မှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒ - neurodegenerative disease မျိုးရိုးဗီဇပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ။ FEBS နှစ်ပတ်လည်ဆုဟောပြောပွဲကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့၌ဝါဆောရှိ 27 ကြိမ်မြောက် FEBS ကွန်ဂရက်၌ပေးအပ်ခဲ့သည်။ FEBS ဂျေ 2004; 29: 2005-272 ။ [PubMed]
စိန့် Onge JR၊ Floresco SB ။ အန္တရာယ် -based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ dopaminergic မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 681-697 ။ [PubMed]
လှေကားများ DJ, Bardo MT ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းခြင်း၏ Neurobehavioral ဆိုးကျိုး Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2009; 92: 377-382 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Steiner H ကို, Gerfen CR ။ striatal output ကိုလမ်းကြောင်းများနှင့်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် dynorphin နှင့် enkephalin ၏အခန်းက္ပ Exp Brain Res ။ 1998; 123: 60-76 ။ [PubMed]
Stewart J. J. အလင်း၏သက်ရောက်မှုကိုပြင်းထန်မှုနှင့်အားဖြည့်ရန်အချိန်ဇယားကိုပြုပြင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1960; 53: 187-193 ။ [PubMed]
Stewart J. J. Pathways relapse to: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurosci ။ 2000; 25: 125-136 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stuber GD, Hopf FW, Hahn J, Cho SL, Guillory A, Bonci A. စေတနာ့ဝန်ထမ်းအီသနောစားသုံးမှုသည် Ventral Tegmental Areaရိယာ၌စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ Synaptic အားကောင်းစေသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008a [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stuber GD, Klanker M၊ de Ridder B, Bowers MS, Joosten RN, Feenstra MG, et al ။ Reward-Predictive Cues သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Synaptic စွမ်းအားကို Midbrain Dopamine Neurons ပေါ်သို့တက်စေသည်။ သိပ္ပံ 2008b; 321: 1690-1692 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tao R, Huang X, Wang J, Zhang H, Zhang Y, Li M. အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးစံနှုန်းများကိုအဆိုပြုထားသည်။ စွဲ။ 2010; 105: 556-564 ။ [PubMed]
Teegarden SL, Bale TL ။ အစားအသောက်ကြိုက်နှစ်သက်မှုလျော့နည်းခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုများပြားလာပြီးအာဟာရဓာတ်များပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက်အန္တရာယ်များစေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 1021-1029 ။ Epub 2007 ဇန်နဝါရီ 1017. [PubMed]
Tejeiro Salguero RA, Moran RM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ကစားခြင်းပြproblemနာဗီဒီယိုဂိမ်းတိုင်းတာသည်။ စွဲ။ 2002; 97: 1601-1606 ။ [PubMed]
Thanos PK, Tucci A, Stamos J, Robison L, Wang GJ, Anderson BJ, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကာလအတွင်းနာတာရှည်အတင်းအဓမ္မလေ့ကျင့်ခန်းများသည်လူးဝစ်ကြွက်များတွင်ကိုကင်းအားအခြေခံထားသောနေရာတွင်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2010; 215: 77-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Thiel KJ၊ Engelhardt B, hood LE, Peartree NA, Neisewander JL ကြွက်များတွင် cue- နှိုးဆွကိုကင်း - ရှာဖွေနေအပြုအမူ attenuating အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းကြားဝင်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2011; 97: 595-602 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Thiel KJ၊ Sanabria F၊ Pentkowski NS, Neisewander JL ပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှု၏တွန်းအားကိုဆန့်ကျင်ခြင်း။ Int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2009; 12: 1151-1156 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သောမတ်စ် MJ, Kalivas PW, Shaham Y. Neuroplasticity သည် mesolimbic dopamine system နှင့် coca စွဲ။ Br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154: 327-342 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Turchan J, Przewlocka B, Toth, G, Lason W, Borsodi A, Przewlocki R. နျူကလိယ၌ mu နှင့် delta opioid အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်၊ ကိုကင်းနှင့်အီသနောအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်၏ accumbens နှင့် striatum ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999; 91: 971-977 ။ [PubMed]
Tzschentke TM ။ တိုင်းတာမှုအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ဆုလာဘ်တိုင်းတာမှု (CPP) ပါ ၀ င်မှု - ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းများ စွဲ Biol ။ 2007; 12: 227-462 ။ [PubMed]
Uhlrich DJ၊ Manning KA၊ O'Laughlin ML, Lytton WW ။ ဓာတ်ပုံ - သွေးဆောင်ခြင်း - ထိတွေ့ခြင်း - အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်တိုးပွားနေသောဆူး - လှိုင်းတုံ့ပြန်မှုကိုထပ်ခါတလဲလဲ strobe ထိတွေ့မှုမှရရှိသည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2005; 94: 3925-3937 ။ [PubMed]
Unterwald EM, Ho A, Rubenfeld JM, Kreek MJ ။ မူးရူးကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားမှုနှင့် dopamine receptor တိုးမြှင့်မှု၏အချိန်သင်တန်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1994a; 270: 1387-1396 ။ [PubMed]
Unterwald EM, Rubenfeld JM, Kreek MJ ။ ထပ်တလဲလဲကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည် oppaid receptors များကို kappa နှင့် mu ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ နေပြည်တော်။ 1994b; 5: 1613-1616 ။ [PubMed]
Valjent အီး, စာမျက်နှာများကို C, Herve: D, Girault ဂျာ Caboche ဂျေကိုစှဲနဲ့ Non-စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် ERK activation ၏ကွဲပြားခြင်းနှင့်တိကျသောပုံစံများသွေးဆောင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 1826-1836 ။ [PubMed]
Van de Weerd HA၊ Van Loo PLP၊ Van Zutphen LFM, Koolhaas JM, Baumans V. သတ္တုဓာတ်များကိုဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက်အသိုက်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အသုံးချတိရိစ္ဆာန်အပြုအမူသိပ္ပံ။ 1998; 55: 369-382 ။
van den Bos R, Lasthuis W, den Heijer E, van der Harst J, Spruijt B. အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်း၏ကြွက်မော်ဒယ်ဆီသို့။ Behav Res နည်းလမ်းများ။ 2006; 38: 470-478 ။ [PubMed]
ဗန် Praag H ကို, ခရစ် BR, Sejnowski TJ, Gage FH ။ ပြေးခြင်းသည်ကြွက်များတွင် neurogenesis၊ သင်ယူခြင်းနှင့်ရေရှည်အာနိသင်တိုးစေသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 13427-13431 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဗန် Praag H ကို, Kempermann, G, Gage FH ။ enviromental သန့်စင်၏အာရုံကြောအကျိုးဆက်များ။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2000a; 1: 191-198 ။ [PubMed]
ဗန် Praag H ကို, Kempermann, G, Gage FH ။ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှု၏အာရုံကြောအကျိုးဆက်များ။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2000b; 1: 191-198 ။ [PubMed]
Vezina P ကို, Giovino AA ကို, ပညာရှိ RA, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများ locomotor ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှုအကြား Stewart ကဂျေပတ်ဝန်းကျင်-တိကျတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1989; 32: 581-584 ။ [PubMed]
et al Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, Logan J ကို, Schlyer DJ သမား။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993; 14: 169-177 ။ [PubMed]
Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Swanson JM ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲတွင် Dopamine - ပုံရိပ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှရလဒ်များ။ မော်လီကျူးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 9: 557-569 ။ [PubMed]
et al Volkow ND, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Schlyer: D, Shiue CY, Alpert R ကို။ postsynaptic dopamine receptors အပေါ်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုဆိုးကျိုးများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990; 147: 719-724 ။ [PubMed]
et al Volkow ND, ဝမ် GJ, Fowler JS, Logan J ကို, Hitzemann R ကို, Ding YS ။ dopamine receptor များလျော့နည်းသော်လည်းအရက်သမားများတွင် dopamine transporters များမဟုတ်ပါ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996; 20: 1594-1598 ။ [PubMed]
Volkow ND, ပညာရှိ RA ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုမည်သို့နားလည်စေနိုင်သနည်း။ သဘာဝအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 8: 555-560 ။ [PubMed]
Vucetic Z, Kimmel J, Totoki K, Hollenbeck E, Reyes TM ။ မိခင်အဆီဓာတ်မြင့်မားစွာပါ ၀ င်သည့်အစားအစာသည် methylation နှင့် dopamine နှင့် opioid-related genes တို့၏မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ Endocrinology ။ 2010; 151: 4756-4764 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wallace DL, Vialou V, Rios L, Carle-Florence TL, Chakravarty S, Kumar A, et al ။ နျူကလိယအတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသဘာဝဆုလာဘ် -related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ J ကို Neurosci ။ 2008; 28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wanat MJ, Sparta DR, Hopf FW, Bowers MS, Melis M, Bonci A. အီသနောထိတွေ့ပြီးနောက် ventral tegmental dရိယာ dopamine အာရုံခံအပေါ်တိကျသော synaptic ပြုပြင်မှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009a; 65: 646-653 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wanat MJ, Willuhn ငါ, Clark က JJ, Phillips က PE ။ စွဲမက်ဖွယ်အပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုများတွင် Phasic dopamine ထုတ်လွှတ်မှု။ Curr မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု Rev. 2009b; 2: 195-213 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ်ဂျေဂျီ၊ Volkow ND၊ Telang F၊ Jayne M၊ Ma J, Rao M စသည်။ အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လူ့ ဦး နှောက်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ Neuroimage ။ 2004a; 21: 1790-1797 ။ [PubMed]
Wang GJ၊ Volkow ND၊ Thanos PK၊ Fowler JS ။ neurofunctional ပုံရိပ်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲအကြားတူညီ: အယူအဆပြန်လည်သုံးသပ်။ စွဲလမ်းရောဂါများဂျာနယ်။ 2004b; 23: 39-53 ။ [PubMed]
ရပ်ကွက် SJ, Walker က EA, Dykstra LA က။ Cue-Induced Reinstatement [cs-] နှင့်ကြွက်များတွင်ပြောင်းဖူးရှာခြင်းအပေါ် Cannabinoid CB1 Receptor Antagonist SR141714A နှင့် CB1 Receptor Knockout ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 2592-2600 ။ [PubMed]
ဝီ S, Koob GF ။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအတွက် dynorphin-kappa opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္.ကို။ psychopharmacology (Berl) 2010; 210: 121-135 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weiss က F, Markou တစ်ဦးက, Lorang MT, Koob gf ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Basal extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်န့်အသတ်-access ကို Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးကိုကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကယုတ်လျော့နေကြသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 593: 314-318 ။ [PubMed]
အမေရိကန်လူကြီးများအကြားတွင် Welte J၊ Barnes G၊ Wieczorek W၊ Tidwell MC, Parker J. အရက်နှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါဗေဒ - ပျံ့နှံ့မှု၊ လူ ဦး ရေပုံစံများနှင့်သက်ဆိုင်မှု။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2001; 62: 706-712 ။ [PubMed]
Werme M, Messer C, Olson L, Gilden L, Thoren P, Nestler EJ, et al ။ Delta FosB သည်ဘီးပြေးခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ J ကို Neurosci ။ 2002; 22: 8133-8138 ။ [PubMed]
Werme M, Thoren P, Olson L, Brene S. Running နှင့်ကိုကင်းတို့သည် medial caudate putamen တွင် dynorphin mRNA ကို upregulate လုပ်သည်။ Eur J ကို Neurosci ။ 2000; 12: 2967-2974 ။ [PubMed]
Winder DG, Egli RE, Schramm NL, Matthews RT ။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် circuit အတွက် Synaptic plasticity ။ Curr Mol Med ။ 2002; 2: 667-676 [PubMed]
Winstanley CA. အဆိုပါ orbitofrontal cortex, Impulse နှင့်စွဲ: အာရုံကြော, အာရုံကြောဓာတုနှင့်မော်လီကျူးအဆင့်မှာ orbitofrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှုစုံစမ်း။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1121: 639-655 ။ [PubMed]
Winstanley CA. လောင်းကစားကြွက်များ: ထကြွလွယ်သောနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူသို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neuropsychopharmacology ။ 2011 ခုနှစ်, 36: 359 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Winstanley, CA, Cocker PJ, ရော်ဂျာ RD ။ Dopamine သည်ကြွက်များတွင် Slot Machine Task ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွင်းဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအား Modulates: `Near-miss 'အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အထောက်အထားဖြစ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၁၁ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Winstanley, CA, Olausson P, တေလာ JR, Jentsch JD ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများမှထိုးထွင်း။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပါ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2010; 34: 1306-1318 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: ပေါ်တွင် anhedonia အယူအဆ 30 နှစ်ပေါင်း။ Neurotox Res ။ 2008; 14: 169-183 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wise RA၊ နာတာရှည်အမ်ဖီတမင်းမှ Munn E. ထုတ်ယူခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိုးဆွနိုင်သည့်အဆင့်ကိုမြင့်စေသည်။ psychopharmacology (Berl) 1995; 117: 130-136 ။ [PubMed]
Wojnicki FH ရောဘတ်ဒီစီ၊ Corwin RL ။ အစားအစာမဟုတ်သောကြွက်များတွင်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သည့်အပြုအမူ၏သမိုင်းအပြီးအစားအစာလုံးလေးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်များအတွက် operant စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် baclofen ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2006; 84: 197-206 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wood က DA, ရေဗက္က GV ။ နျူကလိယအတွက် core ကိုနှင့် shell ကို Single- ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု၏ Dissociation အခမဲ့ရွေးချယ်မှုအသစ်အဆန်းအတွက် accumbens ။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2004; 152: 59-66 ။ [PubMed]
လူငယ် KS ။ အင်တာနက်စွဲ - ဆေးသစ်ဆိုင်ရာရောဂါအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 1998; 1: 237-244 ။
ဇေဘတို့ကို FD, Robbins TW, Winstanley CA. လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူ၏ Serotonergic နှင့် dopaminergic မော်ဂျူတဲ့ဝတ္ထုကြွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်သုံးပြီးအကဲဖြတ်အဖြစ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 2329-2343 ။ [PubMed]
Zhu J, Apparsundaram S, Bardo MT, Dwoskin LP ။ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းမှုသည်ကြွက် medial prefrontal cortex တွင် dopamine Transporter ၏ဆဲလ်မျက်နှာပြင်ဖော်ပြမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ J ကို Neurochem ။ 2005; 93: 1434-1443 ။ [PubMed]
Zijlstra F, Booij J, van den Brink W, Franken IH ။ striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor binding နှင့်မကြာသေးမီက abstinent မူးယစ်ဆေး - မှီခိုအထီးအတွက် cue- ထုတ်ယူတဏှာစဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်။ Eur Neuropsychopharmacol ။ 2008; 18: 262-270 ။ [PubMed]
Zlebnik NE, Anker JJ, Gliddon LA၊ ကာရိုး ME ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ဘီးပြေးခြင်းဖြင့်ကိုကင်းရှာဖွေခြင်းမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလျှော့ချခြင်း။ psychopharmacology (Berl) 2010; 209: 113-125 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zuckerman အမ်အာရုံခံရှာဖွေမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ endogenous လိုငွေပြမှုသီအိုရီ။ NIDA သုတေသန Monograph ။ 1986; 74: 59-70 ။ [PubMed]
Zuckerman အမ် Sensation ရှာခြင်း။ In: Lipsitt L၊ Mitnick L၊ အယ်ဒီတာများ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအပြုအမူနှင့်အန္တရာယ် - ယူခြင်း - အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ။ Ablex ထုတ်ဝေရေးကော်ပိုရေးရှင်း; Norwood, NJ: 1991 စစ 143-152 ။ ။
မိဘများ:“ ငါ့ကလေးကညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့မပြောခင်၊ ကလေးတွေအသုံးများဆုံးနည်းလမ်းကိုပထမဆုံးသတင်းပို့တာကိုသိတယ်။ t.co/CWk5v91uIR